YEYINTNGE(CANADA): Thursday, July 16
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 59 မိနစ်
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ကစပြီး ကြည့်ရင်တော့ စင်္ကာပူမှာ သင်္ဘောကျင်းအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ရေတပ်အတွက် Sambawang Shipyard ရှိပါတယ်။ ဂျပန်တွေကလည်း Jurong Shipyard, Hitachi-Zoezin Shipyard စတင်ခဲ့ကြတယ်။ စင်္ကာပူအစိုးရ အနေနဲ့ သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းကို ST Marine (Singapore Technology) နဲ့ Keppel Shipyard စသဖြင့် ဝင်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ရင်း အခုတော့ စင်္ကာပူအစိုးရ ရှယ်ယာအများဆုံးရှိတဲ့ Sambawang Corporation နဲ့ Keppel Corporation ၂ ခုကပဲ တခြားသင်္ဘောကျင်းများကို လက်ဝါးကြီးအုပ် ဝယ်ယူသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာတော့ KEPPEL CORPORATION (10 Billions S$) နဲ့ SEMBCORP (9 Billions S$) တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်က လာတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ဒီကုမ္ပဏီကြီး ၂ ခုနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သင်္ဘောကျင်းများမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီသင်္ဘောကျင်းတွေရဲ့ Sub Contract လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီအငယ်၊ အလတ်စားများ S&E Companies မှာလည်း မြန်မာအလုပ်သမား၊ အင်ဂျင်နီယာများစွာကို တွေ့ရပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၁၉၉ဝ ကျော်ပိုင်းက စင်္ကာပူမှာ မြန်မာအလုပ်လာရှာသူများအတွက် အလွယ်ကူဆုံး အလုပ်ရနိုင်ပြီး၊ အစိုးရက အလုပ်လုပ်ခွင့် မြန်မြန် ပါမစ်ချပေးတာက သင်္ဘောနဲ့ဆိုင်တဲ့ Marine Industry ပါပဲ။ အလုပ်သမားအနေနဲ့တော့ ယခင်က အိန္ဒိယပြည်က အလုပ်သမားတွေပဲ သုံးနေရာကနေ အခုနောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ အလုပ်သမား၊ အင်ဂျင်နီယာများစွာကို တွေ့နေရပါပြီ။ အထူးသဖြင့် Keppel Corporation က သင်္ဘောကျင်းများမှာ မြန်မာများစွာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာစာနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများပင် ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ အစိုးရသုံး ဘာသာကြီး ၄ မျိုး (အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ မလေး၊ အိန္ဒိယ (Tamil) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ သင်္ဘောကျင်းလောကမှာ မြန်မာဘာသာစကား ပြောသူ များလာတာကို မြင်ရပါတယ်။
သင်္ဘောနဲ့ဆိုင်တဲ့ အလုပ်များမှာ မြန်မာများ နေရာပိုရလာရေးအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ စာအုပ်ငယ် Singapore.info.2009.Build Your Future ကို အင်တာနက် http://monywa.org/singaporeinfo.htm မှာ ဒေါင်းလုပ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ပြုစုသူ အေးငြိမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန် ကောင်းမွန်တဲ့ စာတမ်းငယ်ဖြစ်ပြီး၊ သင်္ဘောကျင်းများသာမက အခြား စက်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအတွက်လည်း ဘဝတိုးတက်ရာ လမ်းပြစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အလုပ်သမား တာဝန်
၂။ အငယ်တန်း အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ
၃။ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ လစာနှုန်းထားနဲ့ အလုပ်သဘာဝများကို Singapore Info စာအုပ်ငယ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
သင်္ဘောပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ သင်္ဘောကျင်းမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း အကြီးစားလုပ်ငန်းကြီးများ (သင်္ဘော ကိုယ်ထည် Hull Bead Blasting, Painting နဲ့ ပိုက်ကြီးများ လဲလှယ်ခြင်း) အစရှိသည်များကို လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ သင်္ဘောမှာပါတဲ့ စက်ကိရိယာများကို ပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကို Marine Automation ကိုတော့ ကုမ္ပဏီငယ်များက လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာတော့ အများအားဖြင့် ငွေပိုအကုန်ခံနိုင်တဲ့ ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးများ လာပြင်ကြပါတယ်။ အခြား ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးများကတော့ ဈေးပိုသက်သာတဲ့ တရုတ်ပြည်၊ ဗီယက်နမ် စသည်တို့မှာ သွားပြင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးများအတွက်
- ရေနံတင်၊ချ ရာမှာသုံးတဲ့ Cargo Loading/ Unloading က Cargo Oil Pump, Tank Leveling, Inert Gas System စတဲ့ အရာများကတော့ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဘွိုင်လာ၊ Steam Turbine, Main Engine, Pump, Generator, Power Distribution System စတဲ့ အရာများကတော့ သင်္ဘောမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ စက်ကိရိယာများ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုတာ၊ ဂျင်နရေတာ၊ ပန့်များကတော့ မွမ်းမံ၊ ပြင်ဆင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
- ရေနံအမျိုးစားများအတွက် Tank Leveling, Temp & Pressure monitoring, Cargo Oil Pump Turbine Control System, Gas Alarm System, Inert Gas System အစရှိတဲ့ Automtion လုပ်ငန်းများ။
- စက်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကရိန်း၊ ရေသန့်စက်၊ မီးရှို့စက်၊ အညစ်အကြေးစွန့်စက်၊ အပူပေးစက် စတဲ့ အထွေထွေ စက်ပစ္စည်းများ ..
- တခြား ရေကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ Navigation Equipment, Oil Discharge Monitoring, Oily Water Seperator စတဲ့ ကိရိယာများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
စက်ပစ္စည်းများအတွက် Automation လုပ်တဲ့နေရာမှာ လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ PLC ၊ DCS ၊ HMS တို့အပြင် Pneumatic လေအား, Hydraulic ဆီအား သုံးတဲ့ Insturment, Control Valves, Actuator တွေကိုလည်း နားလည်ကျွမ်းကျင်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ စက်ရုံအလုပ်ရုံ အတွေ့အကြုံရှိဖူးသူတွေအတွက် သိပ်မခဲယဉ်းလှပေမယ့် ဘာမှမလုပ်ဖူးသူများအတွက် လေ့လာရပါတယ်။
သင်္ဘောမှာသုံးတဲ့ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများဟာ ရှုပ်ထွေးခက်ခဲခြင်း မရှိလှပါဘူး၊ နားလည်လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်က ကြမ်းပါတယ်။ သင်္ဘော အပေါ်အောက်၊ တက်လိုက်၊ ဆင်းလိုက် လုပ်ရတယ်။ စက်ချေး၊ ဆီချေးနဲ့ ညစ်ပတ်ပေရေတာထက် ဆိုးတာကတော့ ပူလောင်လှတဲ့ အင်ဂျင်အခန်းမှာ စက်ကြီးများနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ အများကြီး သတိထားရပါတယ်။ High Temperature, High Pressure, Machin Movement တွေကြားမှာ လုပ်ရတဲ့အတွက် အထူးသတိထားရပါတယ်။ သင်္ဘောကျင်းမှာဆိုရင် ပစ္စည်းတွေ အသစ်လဲလှယ်၊ အတင်အချ လုပ်ရတဲ့အခါမှာ မကြာခဏ သေကြေ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေ ရှိတဲ့အတွက် Safety ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် လုပ်ရပါတယ်။ ဦးထုပ်၊ ခါးပတ်၊ မျက်မှန် စတဲ့ အကာအကွယ်များကို သေချာဝတ်ဆင်ရပြီး သံထည်များကို ဖြက်ဆက်၊ ကပ်ညှပ်ရာမှာ Gas Oxigen Cutter, Welding Machine, Grinding, Blasting, Drilling စတဲ့ လုပ်ငန်းများဟာ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အတွက် သင်္ဘောကျင်းတိုင်းမှာ Safety Department ဟာ အရေးကြီးတဲ့ ဌာနဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောကျင်း အလုပ်လာလုပ်ရင် Safety Course သင်တန်း အရင်တက်ရပါတယ်။
Electrical Power Distribution and Automation
လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းများအနက် သင်္ဘော၊ Power Generation and Distribution System ကို အထူးသဖြင့် ဂျပန်ကုမ္မဏီကြီးများ ထုတ်လုပ်တဲ့ Circuit Breaker, Contactor, Relay တွေကို အသုံးများကြပါတယ်။ မိုတာများ၊ Marine Cable ဆိုတဲ့ အလွန်မာတဲ့ လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဂျင်နရေတာ၊ ဘက်ထရီ စတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ရှိပါတယ်။
သင်္ဘော အင်ဂျင်ခန်းမှာတော့ စက်ပစ္စည်းများ အပြည့်အကြပ် ပြွတ်သိပ်ထည့်ထားပါတယ်။ သင်္ဘောရဲ့ Main Engine ကတော့ အကြီးမားဆုံးသော စက်ကြီးပါပဲ။ သင်္ဘောခုတ်မောင်းဖို့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကြီး ပစ်စတင်အကြီးကြီးများကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ခန်းဟာ အင်မတန် ဆူညံတဲ့အတွက် နားကျပ်ကို အမြဲတပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ အင်ဂျင်ခန်း၊ သင်္ဘောရဲ့ နောက်ဘက်မှာ ဘွိုင်လာကြီး ၂ ခုကို တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီကနေ ရေနွေးငွေ့ထုတ်ပြီး Steam Turbine, Steam Heating System တွေကို လည်ပတ်စေပါတယ်။ Steam Turbine များနဲ့ ရေနံစိမ်း Cargo Pump များနဲ့ Water Balast Pump တွေကို လည်ပတ်စေပါတယ်။ အင်မတန် ပူလောင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ရေနွေးငွေ့အပူချိန် ၂ဝဝ ဒီဂရီအထက်ရှိပြီး ဖိအား (Pressure) က 10 to 15 Kg/cm2 ရှိပါတယ်။ သင်္ဘောအကြီးတွေဆိုရင် Steam Temp 400 deg C & Pressure 60 Kg/cm2 အထိရှိတော့ အင်မတန် သတိထားရပါတယ်။ Air Compressor, Power Generator, Water Pump Motors, Alarm Noise စသဖြင့် အလွန်ဆူညံလှတဲ့အခန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ECR လို့ခေါ်တဲ့ Engine Control Room ကတော့ အလုံပိတ် လေအေးစက်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကွန်ပြူတာ၊ Drawing၊ Monitoring System, Control System, Electrical Poser Distribution Panels တွေကို စုပေါင်းပြီးထားပေးပါတယ်။ သင်္ဘောအင်ဂျင်နီယာများ ခေတ္တဝင်ပြီး နားနေ၊ ကော်ဖီသောက်ရာ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Inert Gas System IGS
ရေနံတင်သင်္ဘောများအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ Inert Gas System ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနံ အတင်အချ လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ရေနံ Oil Tank ထဲမှာ မီးမလောင်တဲ့ Inert Gas ကို ထည့်ပေးရပါတယ်။ အဲဒီ Inert Gas ကို ဘွိKင်လာ မီးခိုးကတဆင့် ရေထဲဖြတ် သန့်စင်စေပြီး ရေနံလှောင်ကန်ထဲ ထည့်ပေးပါတယ်။ အောက်စီဂျင်ကိုလည်း ၃ - ၈ ရာနှုန်း ထိန်းပေးထားခြင်းဖြင့် မီးမလောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီစနစ် အလုပ်လုပ်မှသာ သင်္ဘောကို နိုင်ငံအစိုးရတွေက ဆိပ်ကမ်းကပ်ခွင့် ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Inert Gas Generator ဆိုတဲ့ မီးခိုးထုတ်စက်ကိုလည်း လိုအပ်သလို မောင်းပေးရပါတယ်။ သင်္ဘော ဆိပ်ကမ်းကပ်ရင် Surveyor တွေက အရင်ဆုံးစစ်ဆေးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောမှာသုံးတဲ့ ဘွိုင်လာကိုတော့ Marine Boiler လို့ ခေါ်ပါတယ်။ AAlborg ဘွိုင်လာကတော့ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ပြီး တခြား အမျိုးအစားများဖြစ်တဲ့ Miura Z boiler, Sunflame, Mitsubishi, Kawasaki, Vacalno စတဲ့ ဘွိုင်လာများစွာ ရှိပါတယ်။ သင်္ဘောတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ တာဘိုင်လည်ပတ်ခြင်း၊ သုံညအောက် ရေခဲတဲ့ရာသီမှ ရေ၊ ရေနံဆီများကို အပူဓာတ်ငွေ့ပေးခြင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးလိုအပ်တဲ့ ဘွိုင်လာပါ။ ဘွိုင်လာမှာ FO Fuel Oil ကိုမီးရှို့ပြီး အပူဓာတ်ပေးရာမှာ အပူချိန် ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ထောင်နဲ့ချီတဲ့အထိ အပူချိန် ပြင်းထန်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ကလည်း ဘွိုင်လာအကြီးအသေးပေါ် မူတည်ပြီး အလွန်မြင့်မားပြီး၊ ရေနွေးငွေ ဖိအား Pressure ကလည်း ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ပြင်းထန်ပါတယ်။ အထူးသတိပြု လုပ်ကိုင်ရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့ တာဘိုင်ကတော့ ရေနံတင်သင်္ဘောတွေ ရေနံစုတ်ထုတ်တဲ့ ပန့် Pump တွေအတွက် အထူးအသုံးကျနေဆဲပါ။ အားကောင်းပြီး နေရာကျဉ်းကျဉ်းပဲ လိုအပ်တော့ အင်ဂျင်ပန့်၊ လျှပ်စစ်မိုတာပန့်တွေ အစားထိုးလို့ မရသေးပါဘူး။ ရှေးတုန်းကတော့ သင်္ဘောမောင်းတဲ့ အင်ဂျင်နေရာမှာ Main Turbine ကိုသုံးပြီး သင်္ဘောဒလက်ကို လည်ပတ်မောင်းခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကြီးများပဲ ရေနံတင်သင်္ဘောအကြီးတွေမှာ အစားထိုးသုံးနေကြပါပြီ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်တဲ့ နေရာမှာလည်း တာဘိုဂျင်နရေတာကို ရေနွေးငွေ့ တာဘိုင်သုံးတာ များပါတယ်။
သင်္ဘောမှာ ရေညစ်ပတ်တွေကို သင်္ဘောအပြင်ဘက် ကြိုက်သလို ထုတ်ပစ်လို့ မရပါဘူး။ ပင်လယ်ပြင် ညစ်ညမ်းမှု၊ Pollution ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေများကြောင့် သင်္ဘောအပြင်ဘက် ထုတ်ပစ်တဲ့ ရေများမှာ ဆီပါဝင်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားဖို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့ International Maritime Organization - IMO တာဝန်ယူထားပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံများကြောင့် ဆီများများပါတဲ့ ရေတွေ သင်္ဘောက စွန့်ပစ်နေတာ အလွယ်တကူ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင် နိုင်ငံတကာ ရေပိုင်နက်ထဲ ဖြစ်ရင်လည်း သင်္ဘောမောင်းတဲ့ ကပ္ပတိန်ကို ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သိန်းနဲ့ချီပြီး ဒဏ်ရိုက်ပါတယ်။ သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းတွင်း ဝင်လာတော့မယ်ဆိုရင် ဆီထုတ်နှုန်းထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ Oil Discharge Monitoring System အလုပ်လုပ်ကြောင်း Surveyor ကို ပြသရပါတယ်။ အဲဒီစက် အလုပ်မလုပ်ရင် သူတို့နိုင်ငံတွင်းကို သင်္ဘော အဝင်မခံပါဘူး။ ဆီပါနှုန်း များနေတဲ့ ရေတွေကိုလည်း ဆီနဲ့ရေ ခွဲခြားပေးတဲ့ Oily Water Seperator စက်ကိုလည်း သင်္ဘောတိုင်း မရှိမဖြစ် ဝယ်ယူထားရပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ပင်လယ်ပြင် မညစ်ညမ်းရေးအတွက် IMO သတ်မှတ်ထားတဲ့ စက်များဖြစ်ပါတယ်။
PLC, DCS, HMI
ရှေးယခင်များကတော့ လျှပ်စစ် ကွန်ထရိုးမှာ Relay Network နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ အခုခေတ်တော့ ပိုလွယ်ကူ၊ဈေးသက်သာတဲ့ Programmable Logic Controller PLC များကို အစားထိုးသုံးလာပြီး၊ LCD Panel touch screen control ကို သုံးလာကြတယ်။ Central Control အဖြစ် DCS, Human Machine Interface HMI စတဲ့ စနစ်ကြီးများကို Module များနဲ့ ဆက်စပ်သုံးစွဲလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ဘောတခုလုံး အပူချိန်၊ ဖိအား၊ အားလုံးကို တနေရာကနေ မြင်ရ၊ ထိန်းရတာ ပိုလွယ်လာပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း သင်္ဘော၊ စက်ရုံများမှာ လူနဲ့ သွားကြည့်လုပ်ကိုင်တဲ့ Manual System ကိုပဲ အားကိုးနေရဆဲပါ။
သင်္ဘောတွေမှာ သက္ကရာဇ် ၂ဝဝဝ နောက်ပိုင်းမှာ တဲလက်စ်ရိုက်တဲ့ ရေဒီယိုအရာရှိဆိုတာ မထားတော့ပါဘူး။ Nigavation လုပ်တဲ့ ရေဒါ၊ ဂျိုင်ရို၊ ဂျီပီအက်စ်၊ စပိလော့ စတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့ သင်္ဘောတစင်းနဲ့ တစင်း ဆက်သွယ်မှုနည်းစနစ်ဟာ အလွန်ကောင်းလာတဲ့အတွက် ရှေးကလို ရေဒီယိုအရာရှိ မလိုတော့ပါဘူး။ သာမန် အရာရှိတယောက်က အလွယ်တကူ သုံးနိုင်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် သင်္ဘော လျှပ်စစ်အရာရှိ Electrician ကပဲ ဒီ Navigation Equipment များကို တာဝန်ယူ၊ ပြင်ဆင်တဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်ပါတယ်။
သင်္ဘောက စက်ပစ္စည်းများ Automation အတွက် အဓိကလိုအပ်တာကတော့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း Automation Instruments များကို မောင်းနှင်ဖို့ Pneumatic (လေအား) နဲ့ Hydraulic (ဆီအား) ၂ မျိုးက အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ အလွန်လေးလံကြီးမားတဲ့ စက်တွေ၊ Cargo Valves တွေ၊ ကရိန်းကြီးတွေကို Hydraulic System နဲ့ အလုပ်လုပ်ခိုင်းရပါတယ်။ သေးငယ်သွက်လက်တဲ့ စက်ကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မီးပွားကျမှာ စိုးရိမ်ရတဲ့ ရေနံသိုလှောင်တဲ့နေရာများမှာ Pheumatic Controller များကို သုံးရပါတယ်။ ဒီခေတ်အခါမှာတော့ Zenar Barrier ဆိုတဲ့ ပေါက်ကွဲမှု ကာကွယ်နိုင်တဲ့ Safety Device တွေ စိတ်ချလက်ချ သုံးလာနိုင်တဲ့အတွက် Pheumatic, Hydraulic ကို အရင်လောက် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မသုံးတော့ပေမယ့် ဒီ
၂ မျိုးကိုတော့ သင်္ဘော၊ ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ့ လောကမှာ အထူးလိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေအေးပေးစက် (Air-con)၊ ကွန်ပရက်စာ၊၊ ဖရီဇာ၊ ဓာတ်အားပေးစက် စတဲ့ စက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်၊ စက်မှု ပစ္စည်းများကို သင်္ဘောပေါ် တပ်ဆင်၊ ကော်မရှင်၊ စမ်းသပ်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ စင်္ကာပူကျွန်းပတ်လည်မှာ သင်္ဘောမျိုးစုံ နေ့စဉ် အစင်းရေ ၅ ထောင်ထက်မနည်း အဝင်အထွက်၊ အသွားအလာ ရှိတဲ့အတွက် သင်္ဘောပြင်ဆင်၊ လုပ်ငန်းဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွက် ဝင်ငွေအမြောက်အမြား ပေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူဟာ ကွန်တင်နာ သင်္ဘောဆိပ်ကလည်း ကုန်တင်ကုန်ချ အများကြီးလုပ်ရပြီး (ကမ္ဘာ့ ကုန်တင်ကုန်ချ အများဆုံး ကွန်တင်နာဆိပ်ကမ်း)၊ ရေနံချက်စက်ရုံများ (ကမ္ဘာ့ ရေနံအများဆုံး ချက်လုပ်သော မြို့) ဖြစ်တဲ့အတွက် ရေနံတင်သင်္ဘောများလည်း အမြောက်အမြား ဝင်ထွက်သွားလာနေကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ အာရပ်နိုင်ငံများက ရေနံများ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အမေရိကားကို သယ်တဲ့ ခရီးစဉ်မှာ စင်္ကာပူကို ကြားခံ ရေနံသိုလှောင်ချထားတဲ့ ပွဲစားနိုင်ငံအဖြစ် အသုံးပြုတော့ စင်္ကာပူမှာ ရေနံချက်လုပ်ငန်းအပြင်၊ ရေနံသိုလှောင်ကန်များစွာ ရှိပါတယ်။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ် ပေါက်ဈေးအရ Oil Tanker သင်္ဘောတန်ဖိုးက တန်ချိန်အရ 32–45,000 DWT, 80–105,000 DWT, and 250–280,000 DWT သင်္ဘောတွေကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း US$43M, $58M, $120M ရှိပါတယ်။ ရေနံအပြည့်တင်ရင် အခေါက်အနည်းငယ်နဲ့ အရင်းကျေတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပေမယ့် အရင်းအနှီး ကြီးလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ဘောပြင်ဆင်၊ ဒေါက်တင်တဲ့အခါ လျင်မြန်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ စင်္ကာပူမှာ မြန်မြန်ပြီးနိုင်တဲ့အတွက် စင်္ကာပူသင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းက စရိတ်ကြီးပေမယ့် အောင်မြင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမား ထောင်၊ သောင်းချီပြီး စင်္ကာပူ သင်္ဘောပြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူ Ship Management Agents နှင့် မြန်မာသင်္ဘောသားများ
စင်္ကာပူအစိုးရပိုင်တဲ့ Neptune Orient Line သင်္ဘောများမှာ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများစွာ အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ သင်္ဘောသားလောကမှာ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ အိန္ဒိယ လူမျိုးပြီးရင် မြန်မာလူမျိုးက အများဆုံးဆိုတဲ့အထိ နာမည်ရပါတယ်။ ယခင်ကတော့ သင်္ဘောသားဆိုရင် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုမှာတော့ လစာကောင်းပေမယ့် ဘဝကြမ်းတမ်း၊ ပင်လယ်ခရီးသွားရတော့ မြန်မာများ သိပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာသင်္ဘောသားများကို ခန့်တဲ့ အေဂျင်စီတွေ မြန်မာပြည်မှာ ပွဲခတောင်ပေးစရာ မလိုတဲ့အထိ ဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာသင်္ဘောသားများကို စင်္ကာပူအခြေစိုက် အေဂျင်စီများက ခေါ်ခန့်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ သင်္ဘောသား အရာရှိတော်တော်များများဟာ စင်္ကာပူကတဆင့် သင်္ဘော အတက်၊ အဆင်း လုပ်ရပြီး တချို့ စင်္ကာပူမှာပဲ အမြဲနေထိုင်ခွင့် Permanant Resident - PR အဖြစ်ကို ရရှိနေကြပါပြီ။ မြန်မာသင်္ဘောသားများအတွက် အေဂျင်စီများကို www.myanmarshipping.com/agents.htm အင်တာနက်မှာ ရှာနိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောပေါ် ပြင်ဖို့ရောက်သွားတဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ၊ အလုပ်သမားများအတွက် သင်္ဘောပေါ်မှာ လုပ်တဲ့ မြန်မာသင်္ဘောသားများ မြန်မာစကားပြောဆိုပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တော့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ သင်္ဘောတွေကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Classification လုပ်ပေးတဲ့ Surveyer Company - Lloyd, ABS, DNV စတဲ့ စစ်ဆေးရေး အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံက နေရာပိုယူလာပါတယ်။ ရေနံတင်သင်္ဘော မှတ်ပုံတင်တဲ့နိုင်ငံများမှာ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်စာရင်းအရ တန်ချိန် ၁ သိန်းကျော်တဲ့ ရေနံတင်သင်္ဘောပေါင်း ၄ဝ၂၄ စင်းမှာ စင်္ကာပူက ပနားမား၊ လစ်ဘာရီးယား၊ မာရှယ်ကျွန်းစုနိုင်ငံပြီးရင် စင်္ကာပူက ကမ္ဘာနံပါတ်၎ နေရာကိုရပါတယ်။ ရေနံတင် သင်္ဘောအများဆုံး ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံများကတော့ ဂရိ၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်တို့ဖြစ်ပြီး၊ သင်္ဘောအားလုံးရဲ့ ၇ဝ % ကို တောင်ကိုးရီးယား၊ ဂျပန်၊ တရုတ် နိုင်ငံများမှာ ဆောက်ကြပါတယ်။ တခါတရံ စင်္ကာပူ သင်္ဘောပေါ်ရောက်သွားရင် Surveyor လည်း မြန်မာလူမျိုး၊ သင်္ဘော Chief Engineer လည်း မြန်မာလူမျိုး၊ Shore Technican (Engineer) လည်း မြန်မာလူမျိုး ကြုံရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ရေနံအများဆုံး ချက်လုပ်သော မြို့မှာ စင်္ကာပူက ထိပ်တန်းမှာ ရှိပါတယ်။ အနီးနားက အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံများက ထွက်တဲ့ရေနံနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်နိုင်ငံများက ရေနံများကို ချက်လုပ်တဲ့ ရေနံချက်စက်ရုံများစွာ စင်္ကာပူတဝိုက် ကျွန်းငယ်လေးတွေမှာ ရှိပါတယ်။ ၂ဝဝဝ နောက်ပိုင်းမှာ Jurong Ilands ဆိုပြီး မြေဖို့၊ ရေနံချက်စက်ရုံများစွာ စက်မှုကျွန်းတခုကို ထပ်ဆောက်ပေးပါတယ်။ Shell, Mobil, Esso, British Petro စတဲ့ ကမ္ဘာ့ ရေနံကုမ္ပဏီကြီးများအပြင် စင်္ကာပူအစိုးရပိုင် Singapore Patrol Corp SPC ရေနံချက်စက်ရုံများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ ရေနံချက်စက်ရုံများမှာ အမြဲတမ်း အင်ဂျင်နီယာ၊ အလုပ်သမား များစွာ ခန့်မထားပေမယ့် Maintanance လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီများမှာတော့ မြန်မာအလုပ်သမားများစွာ ရှိပါတယ်။ အခု ၂ဝဝ၈ နောက်ပိုင်း စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်ပြီး စင်္ကာပူစက်ရုံ၊ သင်္ဘောကျင်းများက မြန်မာအလုပ်သမားများစွာ ပါမစ်ဆက်မတိုးပေးဘဲ မြန်မာပြည်ပြန်ရပါတယ်။ သို့သော် ရေနံချက်စက်ရုံများရဲ့ Oil & Gas Industry အလုပ်များကတော့ သိပ်မကျပါဘူး၊ ဆက်လက်ကောင်းစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Pulau Bukom Refinery (Shell) - ၄၅၈ဝဝဝ ဂါလံ၊ Jurong Island Refinery (ExxonMobil) ၆ဝ၅ဝဝဝ ဂါလံနဲ့ စုစုပေါင်း တရက် ဂါလံတသိန်းကျော် ချက်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ အများဆုံး ရေနံချက်လုပ်တဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ရေနံတူးစင်များ နှင့် FPSO
ရေနံတူးစဉ်များလည်း ယခင်က စင်္ကာပူအထိ သင်္ဘောနဲ့ဆွဲလာပြီး၊ ပြင်ဆင်ကြတယ်။ ပြီးရင် ကမ်းလွန်ရေနံတူးတဲ့ နေရာတွေကို သင်္ဘောနဲ့ ဆွဲသွားပြီး ကျောက်ချ၊ ရေနံတူးကြတယ်။ ဒါကြောင့် စင်္ကာပူတဝိုက်မှာ ရေနံမထွက်ပေမယ့် ရေနံတူးစင် Oil Rig အများအပြား တွေ့ရပါတယ်။ စင်္ကာပူက FELS Far East Levistan Shipyard မှာ ရေနံတူးစဉ်အသစ်များ တည်ဆောက်ပါတယ်။ တခုတခုကို တနှစ်ကနေ ၂ နှစ်ကြာအောင် ဆောက်ရပါတယ်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ သင်္ဘောတွေကို သံထည် ၂ ထပ် Double Hull လုပ်ရမယ့် ဥပဒေ ထွက်လာပါတယ်။ ယခင်က သင်္ဘောဟောင်းလာရင် သံဈေးနဲ့ ရောင်းချလိုက်ရတယ်။ သင်္ဘော နှစ် ၂ဝ ကျော်ကြာတဲ့ အဟောင်းတွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံထိ ဆွဲယူသွားပြီး အိန္ဒိယမှာ သင်္ဘောတစီးလုံးကို တခဏချင်းမှာ အပြောက် Scrap လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ အိန္ဒိယမှာ သံထည်၊ သံမဏိလုပ်ငန်းမှာ ကုန်ကြမ်းအဖြစ် သုံးပစ်လိုက်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ရေနံတင်သင်္ဘော အဟောင်းကြီးတွေကို သံထည်တထပ်ထဲရှိတော့ ပင်လယ်မှာ မောင်းခွင့် မရှိတော့ဘူး။ ဒီတော့ ပင်လယ်ကမ်းလွန် ရေနံတွင်းနားမှာပဲ ရေပေါ် ရေနံချက်လုပ်စက်ရုံ၊ သိုလှောင်ကန်အဖြစ် Floating Production Storage and Offshore FPSO အဖြစ် Conversion ရေနံတင်သင်္ဘောကို ကမ်းလွန် ရေပေါ်ရေနံချက်စက်ရုံ၊ သိုလှောင်ကန် အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်း ခေတ်စားလာတယ်။ စင်္ကာပူမှာ အဲဒီလို Conversion သင်္ဘော တနှစ်ကို ၅ စီးလောက် လုပ်တော့ အလုပ်သမား အများကြီး လိုလာပါတယ်။ Project တခုကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ရာ၊ ထောင်နဲ့ချီ သုံးနိုင်ကြပါတယ်။ ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းက မြက်မြက်ကလေးရတဲ့ ပေါ်ပင်လုပ်ငန်းဆိုတော့ ငွေသုံးနိုင်ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရေတပ်သားများ အုပ်စုလိုက် စင်္ကာပူမှာ Diver ရေငုတ်သမားအဖြစ် လာလုပ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာတော့ ရေငုတ်အလုပ်သမားဟာ လစာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်လည်း အလွန်ကြီးတယ်။ သင်္ဘောအောက်ခြေ ဝမ်းပိုက်မှာရှိတဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေ၊ စက်ပစ္စည်းတွေကို ရေအောက် ကင်မရာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ဖြုတ်ထုတ်၊ အသစ်လဲ လုပ်ငန်းများဟာ မလွယ်လှပါဘူး။ ပင်လယ်အောက်မှာ ရေပိုက်ချ၊ ဓာတ်ကြိုး၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ ချထား၊ ဆယ်ယူတဲ့ လုပ်ငန်းများကို လုပ်တဲ့ ရေအောက်လုပ်ငန်း စပယ်ရှယ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီများလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ သင်္ဘောကျင်းတွေက ရေအောက်ငုတ်စရာ ကိစ္စပေါ်လာရင် အဲဒီရေငုတ်သမား ကုမ္ပဏီများကို ခေါ်ရပါတယ်။
သင်္ဘောလုပ်ငန်းနှင့် စင်္ကာပူအစိုးရ အားပေးမှု
စင်္ကာပူဟာ ယခင်ကတည်းက သင်္ဘောလုပ်ငန်းကြောင့် ပီနန်ကျွန်းထက်သာပြီး တိုးတက်ကြီးပွားလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောလုပ်ငန်းဟာ စင်္ကာပူ တိုးတက်ကြီးပွားရခြင်းရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရက အထူးအားပေးလျက် ရှိပါတယ်။ အစိုးရ The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) http://www.mpa.gov.sg/ အင်တာနက်မှာကြည့်ရင် သင်္ဘောလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်လိုသူများကို အထူးကူညီပေးတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှ SettingaMarine Business အတွက် အားပေးပါတယ်။ စင်္ကာပူ ပေါ်လီတက်ကနစ်မှာ ၃ နှစ် ကျောင်းတက်ရင် အစိုးရ Shipping Company တွေက ကျောင်းစတက်တာနဲ့ လစာပေးပါတယ်။ ၃ နှစ်ပြီးရင်လည်း တလ ၂ဝဝဝ လောက်နဲ့ အလုပ် ချက်ချင်းခန့်ပါတယ်။ သင်္ဘောအင်ဂျင်နီယာအလုပ် ၅ နှစ်လောက် လုပ်ပြီးရင် လစာ ၅ ထောင်လောက် ပေးပါတယ်။
စင်္ကာပူ NTU, NUS တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်း ဘွဲ့လွန် Marine Degree/ Master တွေကို Sponsorship နဲ့ တက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလူငယ်များဟာ စင်္ကာပူက သင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးများမှာ မန်နေဂျာ၊ ဒါရိုက်တာများ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ တော်တော်များများလည်း စင်္ကာပူမှာ သင်္ဘောဆောက်တဲ့ ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ၊ Ship Building, Ship Contractor ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ သင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီး Tracking System ကိုလည်း အချိန်မရွေး Call Sign မေးလို့ရပါတယ်။ မိမိသင်္ဘောရဲ့ Information ကိုလည်း အလွယ်တကူ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် သင်္ဘောကျင်း၊ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအခြေအနေ
မြန်မာပြည်ရဲ့ သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းကတော့ ယခင်က ဆင်မလိုက်သင်္ဘောကျင်း၊ ရေတပ်သင်္ဘောကျင်းတွေပဲ ရှိပြီး မြန်မာသင်္ဘောသားတွေ လက်တွေ့ Dock Service သွားယူရတဲ့နေရာ ၂ ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပေါ်လစီကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို သင်္ဘောများ အဝင်အထွက် များများ မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် သင်္ဘောပြင်တဲ့လုပ်ငန်း မြန်မာပြည်မှာ မတိုးတက်သေးပါဘူး။ ကြယ်ငါးပွင့်၊ မြန်မာ့ငါးလုပ်ငန်း၊ ပြည်တွင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အစိုးရလုပ်ငန်းတွေပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နိုင်ငံခြား သင်္ဘောလိုင်းတွေ များများ မလာနိုင်သေးပါဘူး။ ရေနံတင်၊ ဓာတ်ငွေ့တင် သင်္ဘောများလည်း မလာဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက ရောင်းချတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ကလည်း ပိုက်လိုင်းက ပို့ပေးခြင်းဖြစ်တော့ သင်္ဘောမလိုသေးပါဘူး၊ သင်္ဘောဆောက်တဲ့ လုပ်ငန်းမှာလည်း မထွန်းကားသေးပါဘူး။ မြန်မာ ရေတပ်သင်္ဘောတွေတောင်မှ စင်္ကာပူအစိုးရ ST Marine သင်္ဘောကျင်းတွေမှာ လာပြင်၊ ဆောက်လုပ် နေရပါတယ်။ သင်္ဘောပြင်လုပ်ငန်းကလည်း သိပ်မခက်ခဲတော့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာပညာရှင် မလိုပါဘူး။
သက္ကရာဇ် ၂ဝဝဝ နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းလွန်ဓာတ်ငွေ့ တွေ့ပြီး ရေနံကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်တဲ့ Total ပြင်သစ်၊ Unical အမေရိကန်တို့နဲ့အတူ ရုရှား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီတွေ တန်းစီပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ကမ်းလွန်ဓာတ်ငွေ့ ဈေးကွက်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားလာပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပထမဆုံး ဓာတ်ငွေ့ ရောင်းရငွေကတော့ ရုရှားလုပ် MIG တိုက်လေယာဉ်ဖိုး ပေးလိုက်ရသလို ပြောပါတယ်။ စစ်တပ်အင်အားချဲ့ပြီး လက်နက်ဝယ်ရင်း အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ခေတ်မီ စစ်လက်နက်များကို ယှဉ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝင်ငွေ ၆ ဘီလျံလောက်ရှိတဲ့အထဲ ဓာတ်ငွေ့ရောင်းရငွေက ရာနှုန်း အမြင့်ဆုံးရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကို ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ တည်ဆောက်ပြီးလို့ ရောင်းချ ဝင်ငွေရနေပြီဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယကိုလည်း ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွေ တည်ဆောက်နေကြပါတယ်။ ဒီတော့ စင်္ကာပူမှာ ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ လုပ်ငန်းကို လုပ်နေသူ မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ကို မျက်စိကျပြီး ဝင်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် မရပါဘူး။ မြန်မာအစိုးရက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနဲ့ သိုသိပ်ကျစ်လစ်စွာ Oil & Gas Industy ကို ချုပ်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ အပြင်လူများ ဝင်ခွင့် မရနိုင်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း စင်္ကာပူမှာ Oil and Gas Industry လုပ်နေတဲ့ မြန်မာအတတ်ပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်လေးများကတော့ မြန်မာပြည် ပြန်လာလုပ်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်ကတော့ ထားနေဆဲပါ။
မြန်မာအလုပ်သမားများ အလုပ်အကိုင် အလားအလာ (၂ဝဝ၉)
မြန်မာပြည်က ကောင်းဆက် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကို မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ စင်္ကာပူမှာ မြန်မာများကို ပိုမိုခန့်ထားကြပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်မှာ မြန်မာများအနေနဲ့ ငွေပိုရပေမယ့် အနေအထိုင်၊ အစားအသောက် သိပ်အဆင်မပြေတဲ့အတွက် မြန်မာအလုပ်သမားများဟာ စင်္ကာပူကိုပဲ ခင်တွယ်ကြတယ်။ စင်္ကာပူကလည်း အလုပ်ပိုပေးနိုင်လာပါတယ်။ ကြမ်းတမ်း၊ ညစ်ပတ်၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အလုပ်တွေမှာ အိန္ဒိယအလုပ်သမားတွေပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်များကတော့ ပညာနဲ့လုပ်ရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ နေရာရပါတယ်။ သင်္ဘောကျင်း လုပ်ငန်းမှာတော့ ပေပေတေတေ လုပ်ရတဲ့အတွက် စင်္ကာပူက ပိုလီဒီပလိုမာရထားတဲ့ မြန်မာများကတော့ တခြားစက်ရုံတွေမှာ လုပ်ကြတာများပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တိုက်ရိုက်လာတဲ့ လူငယ်၊ လူကြီးများအတွက်ကတော့ သင်္ဘောကျင်း၊ ရေနံဓာတ်ငွေ ကုမ္ပဏီတွေမှာ အလုပ်ရလွယ်ပြီး၊ ငွေလည်း အသင့်အတင့် ရကြပါတယ်။ စင်္ကာပူရဲ့ အဓိက နိုင်ငံခြားပို့ကုန် နံပါတ် ၁ ကလည်း ရေနံထွက်ပစ္စည်းဖြစ်တော့ ဒီလုပ်ငန်းက ကောင်းစားနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်ပြည်မကြီး၊ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ အလုပ်သမားများ သင်္ဘောကျင်းများရှိတဲ့ Jurong, Tuas တဝိုက်မှာ ပက်လက်ကားကြီးတွေအပေါ် တင်ပြင်ခွေပြီး အစုလိုက်သွားလာနေပုံတွေ၊ အလုပ်သမားတွေကို ထမင်းထုပ်ရောင်းပို့တဲ့ မြန်မာထမင်းဆိုင်တွေ၊ အလုပ်သမားတွေ တလကို ဒေါ်လာ ၁ဝဝ လောက်နဲ့ငှားပေးတဲ့ အလုပ်သမားတန်းလျားတွေမှာ လူငယ်အလုပ်သမားများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သွားလာလှုပ်ရှားနေပုံတွေ ပင်လယ်ရပ်ခြား စင်္ကာပူမှာ မိသားစုနဲ့ခွဲခွာ လာကြတဲ့ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများရဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါ။
သင်္ဘောကျင်း၊ ရေနံဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများမှာ လုပ်ကိုင်သူ မြန်မာများကို လေးစားလျက် ကျန်းမာ၊ချမ်းသာစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
(ဇူလိုင်လ ၇ ရက်၊ ၂ဝဝ၉)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/16/2009 1 အကြံပြုခြင်း
NEJ / ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၉
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/16/20090အကြံပြုခြင်း
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ရခိုင်ဒုက္ခသည် မိသားစု (၂) စု ကနေဒါသို့ ထွက်ခွာ
အဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးပါသော ရခိုင် ဒုက္ခသည် မိသားစု (၂) စုသည် ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံး၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ကနေဒါ နိုင်ငံတွင် အခြေချနေထိုင်ရန် အတွက် ယနေ့တွင် ဒက္ကားမြို့မှ ကနေဒါ နိုင်ငံသို့ လေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာသွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံတွင် အခြေချခွင့် ရရှိသွားသော ရခိုင်ဒုက္ခသည် မိသားစုမှာ ဦးမြတ်ထွန်း( ဆရာမဲ)နှင့် ဒေါ်လှနုယဉ် မိသားစု ဖြစ်ပြီး သူတို့နှင့်အတူ ဦးမြတ်ထွန်း၏ ယောက္ခမ မိသားစုလည်း ပါဝင်သည်။
ဦးမြတ်ထွန်းမိသားစုမှာ မြောက်ဦးမြို့ဇာတိ် ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းက ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသော မိသားစု ဖြစ်ပြီး ဦးမြတ်ထွန်း ရခိုင်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူ တဦး ဖြစ်သည်။
ကနေဒါ နိုင်ငံသို့ မထွက်ခွာမှီ စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ် ဘင်ဒရိုဘင် မြို့တွင် မြို့ပေါ် ဒုက္ခသည် အဖြစ် ရပ်တည်နေထိုင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ မြို့တွင် နေထိုင်စဉ် လုံခြုံရေးအရ ခြိမ်းခြောက်မူများ ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယခု တကြိမ် ရခိုင်ဒုက္ခသည် မိသားစု နှစ်စု တတိယ နိုင်ငံတခုတွင် အခြေချ နေထိုင်ခွင့် ရရှိသွားခြင်းမှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ပြီး ယခင်က ရခိုင် ဒုက္ခသည် အုပ်စု နှစ်အုပ်စုမှာ သြစတြေးလျနှင့် နယ်သာလန် နိုင်ငံတို့တွင် အခြေချနေထိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
ယခုကဲသို့ ရခိုင်မိသားစု နှစ်စု ကနေဒါနိုင်ငံတွင် အခြေချ နေထိုင်ခွင့် ရရှိသွားသဖြင့် ကျန်ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ အနေဖြင့်လည်း တတိယ နိုင်ငံ တခုခုတွင် အခြေချ ရပ်တည်နေထိုင်နိုင်ရေး အတွက် လမ်းစ ဖြစ်ဖြစ်သည်ဟု လေ့လာသူများက သုံးသပ်သည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံတွင် ရခိုင်မြို့ပေါ် ဒုက္ခသည် ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး အများစု ဒုက္ခသည်များမှာ ဘက်ပေါင်းစုံ အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
အာဇာနည်နေ့ နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အကြောင်း ဂျာနယ်များတွင် အကျယ်တ၀င့် ဖေါ်ပြခွင့်မရ
၁၆ ဇူလိုင် ရန်ကုန်၊ ၊ယူကွန်
Junta Ignore Late General Aung Sann and Matyrs’ Day
၆၂ နှစ်မြောက် အာဇာနည် နေ့ အကြောင်း နှင့် အင်းစိန်ထောင်တွင်းဖမ်းဆီးတရားစွဲ ဆိုခံထားရသူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်း ကို စာပေစီစီစစ်ရေး မှ ဖေါ်ပြခွင့် မပေးသဖြင့် ဂျာနယ်များတွင် အကျယ်တ၀င့် ဖေါ်ပြခွင့်မရ ဟု ရန်ကုန် မြို့ရှိ သတင်းထောက် တစ်ဦးမှ Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
ယနေ့ ခောတ်လူငယ်များ အာဇာနည်နေ့နှင့် ပတ်သက် ၍ သိသည့်သိထိုက် သည်များ ကိုသိရှိရန်နှင့် ကျဆုံးသွားခဲ့ သည့် အာဇာနည် ၉ ဦး၏ လွတ်လပ်ရေး အတွက် အသက်စတေးခဲ့ရပုံ တို့ ကိုသိရှိရန် ပြည်တွင်းဂျာနယ်တစ်စောင် ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအ၀င် အာ ဇာနည်များ၏ သတင်းကိုဖေါ်ပြသော် လည်း စာပေစီစစ်ရေး က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ပါဝင်သော သမိုင်းဝင် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ နှင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းအကြောင်း နှင့် ပြည်သူများ၏ ခံစားချက် အင်တာဗျူး တိုများကို ဖြုတ်လိုက်သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ သတင်း၊အင်တာဗျူး နှင့် ဓာတ်ပုံကို သူ၏ဂျာနယ်တွင် ထည့် သွင်းဖေါ်ပြခွင့်မရခဲ့သည့် အယ်ဒီတာက “လွတ်လပ်ရေး အတွက် အသက်စတေးခဲ့ သူတစ်ယောက် သာမဟုတ်ဘူးမြန်မာ နိုင်ငံရဲ့တပ်မတော် ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ကိုပါ ထောင်သွားခဲ့ တဲ့ လူမို့ လေးစားဂုဏ်ပြုထိုက် ကြောင်း ရေးတာ သူထောင်ခဲ့တဲ့ စစ်တပ် ကပဲ သူ့ အကြောင်းဖေါ်ပြခွင့်မပြုဘူး၊ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းလဲ ”ဟုသူ၏ ခံစားချက် ကိုပြောသည်။
စာပေစီစစ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကမူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းဖေါ်ပြချက်များကို အထက်မှညွှန်ကြားချက်အရ ယခုကဲ့သို့ ဖြုတ်ရခြင်းဖြစ်သည် ဟုပြောသည်။
နေပြည်တော် ရှိ ၀က်တုပ်ကွေးလူနာ သတင်းထုတ်ပြန်မှု မပြု
၁၆ ဇူလိုင် ရန်ကုန် ၊ ၊ညွန့် သက်ထားဦး
Naypyidaw Blackout First A(H1N1) Case
နေပြည်တော်တွင် ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ A(H1N1) ရောဂါပိုး တွေ့ ရှိသူတစ်ဦး ကို တွေ့ ရှိကြောင်းနေပြည်တော် ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ အမည်မဖေါ်လိုသော ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဆီမှ သတင်းရရှိ
သည်။စစ်အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်တွင် ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ တွေ့ ရှိသူ နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအမှောင်ချထားပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမပြု ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ အေတုပ်ကွေးရောဂါပိုးတွေ့ ရှိသူသည် အသက်၂၅ နှစ်အရွယ်ခန့် ရှိ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန မှ အရာရှိတစ်ယောက်၏ သားဖြစ်ကာ ဘန်ကောက်မြို့ တွင် တစ်နှစ်ကြာနေ
ထိုင်ပြီးနောက် ပြန်ရောက်လာချိန်တွင် တွေ့ ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ပိုး
တွေ့ ရှိသူမှာ နေပြည်တော်သို့ ခေတ္တလာရောက် လည်ပတ်သူဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။
ရောဂါပိုးရှိသူ ကို နေပြည်တော်ရှိ ဆေးရုံသစ်ကြီးတွင် တင်ဆောင်ထားသည် ဟု သိရသော်လည်း
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့် အရ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းထားသည် ဟု ၀န်ထမ်းတစ်
ဦးကပြောသည်။ အဆိုပါ ရောဂါပိုး ရှိသူကို တနင်္လာနေ့က တွေ့ ရှိခြင်းဖြစ်သည် ။
နေပြည်တော် ရှိ အစိုးရ၀န်ထမ်း အိမ်ရာများတွင် ပိုးသတ်ဆေးများဖြန်းခြင်း၊ရောဂါ နှင့် ပတ်သက်
သည့် လမ်းညွှန်ချက် များထုတ်ပြန် ခြင်းတို့ ကို ယခု အပတ် အတွင်းတိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်လျှက်
(နေပြည်တော် ရှိ ၀က်တုပ်ကွေး လူနာရှင် သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Freedom News Group မှထပ်မံစုံစမ်းဆဲ ဖြစ်ပါသည်)
၀က်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် ကျောင်းများပိတ်တော့မည် ဟု သတင်းထွက်ပေါ်
July 15, 2009 · LeaveaComment
၁၅ ဇူလိုင် ရန်ကုန်၊ ၊ယူကွန်
Burma Capital School May Close Next
A(H1N1) ဟုခေါ်ကြသည့် ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါမှာ ရန်ကုန်မြို့ တွင် အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားသော စာရင်း ထက်ပိုမိုများပြားလိမ့်မည် ဟုကျောင်းသားမိဘတို့ က ယုံကြည်ကြသဖြင့် ၎င်း တို့ ၏ သား
သမီးများကို ကျောင်းသို့ မပို့ ပဲ ထားကြရာ စာသင်ခန်းများတွင် ကျောင်းသားဦးရေ နည်းလာသဖြင့်
ခြေခံကျောင်းများကို လတ်တလောပိတ်ထားနိုင်သည် ဟု အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက
ကျောင်းသားမိဘများက ၀က်တုပ်ကွေးအပြင် မိုးရာသီတွင် ဖြစ်တတ်သောတုပ်ကွေးရောဂါများ
ကြောင့် ကျောင်းသားမိဘများက သားသမီးများကို ကျောင်းသို့ မပို့ ပဲထားခြင်းဖြစ်သည် ဟုပြော
သည်။အထက (၁) ဒဂုံ တွင် ပညာ သင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ မိခင်ဖြစ်သူကမူ“၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါဖြစ်နေလို့ ကျောင်းကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီးသွားတာပဲ ကျောင်းက
တော့ တိုင်းက ကလေးတွေ မျက်နှာဖုံး တပ်ပြီး မလာရဖူးဆို လို့ မျက်နှာဖုံး မစွပ်ရတော့ ဘူး ဘယ်မိဘ မှ သားသမီး ကို ရောဂါကူးစက်မှ မြင် စေချင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်မို့ ကလေးကို ကျောင်း မပို့ တော့ ဘူး ဟု ပြုသည်။
အထက (၂) ရန်ကင်းမှ အလယ်တန်းပြ ဆရာမ တစ်ဦးကမူ ကျောင်းတွေ ပ်ိတ်ဖို့ တော့မဖြစ် နိုင်သေးဘူး ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ထောင်ချမယ်ဆိုရင် တော့ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ ကျောင်းတွေ ကို ၀က်တုပ်ကွေး ကို အကြောင်းပြပြီး ပိတ်ထားနိုင် တယ်ဟု ပြောသည်။
မဲဆောက် ၀က်တုပ်ကွေး ကြောင့် တခ်ခရိုင် ရှိမြန်မာ ဒုက္ခသည်တို့ စိုးရိမ်
၁၆ ဇူလိုင် မဲဆောက်၊ ၊စောမူဂေး
Burmese Refugees in Thailand Fears on A(H1N1)
မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်ပိုးသတ်ဆေးများလိုက်လံဖျန်း ပက်နေပုံ
ထိုင်းနိုင်ငံ တခ်ခရိုင် မဲဆောက်မြို့ တွင်ဝက်တုပ်ကွေး ရောဂါဖြစ်ပွားသူ လူနာသုံးဦး တွေ့ ရှိခြင်းကြောင့် တခ်ခရိုင် အတွင်းရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင်နေကြသည့် ဒုက္ခသည်များမှာထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ လျှက်ရှိကြသည်။
ယနေ့ မနက်က မဲလဒုက္ခသည် စခန်းအတွင်းတွင် ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးရှိသူ တစ်ဦး တွေ့ ရှိထား
သည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။မယ်လ ဒုက္ခသည် စခန်းရှိ ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကမူ ရာသီအလိုက် ဖြစ်တတ်သည့် တုပ်ကွေးရောဂါဝေဒနာရှင်များနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်နေသည့် ကလေးအချို့ သာရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
တခ်ခရိုင် အတွင်းရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများဖြစ်သည့် နို့ ဖိုး၊အုံးဖျန်နှင့် မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းတို့ တွင်
A(H1N1) ခေါ်ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးတွေ့ ရှိခြင်းမရှိသော် လည်း စခန်းတွင်းရှိ ဒုက္ခသည် အများစု
အုံးဖျန် စခန်းအတွင်းရှိ မြန်မာ ဒုက္ခသည် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်စောဦးက “ဒီကမ့်တွေ မှာက ဆေးဝါးလုံ
လောက်မှုမရှိဘူး ရောဂါဖြစ်ရင်လဲ မဲဆောက်မှာ လို ဆေးဝါးစုံတာမဟုတ်ဘူး၊ကမ့်ထဲမှာ ၀က်တုပ်
ကွေးဖြစ်တဲ့လူ ကို အပြင်ထွက် ကုခွင့်မပေးဘူး ဆိုတာကြောင့် ဒီမှာ တော်တော်ကြောက်နေကြပြီဟု
မဲလ ဒုက္ခသည် စခန်းတွင်မူ ယနေ့ မှ စ၍ ပိုးသတ်ဆေးမှုတ်စက် များဖြင့် ရောဂါပိုးမွှားနှိမ်နှင်းရေး
ဆောင်ရွက်ချက် တို့ ကိုပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့ မြ၀တီ နှင့် ကပ်လျှက်တွင်တည်
ရှိသော မဲဆောက်တွင် ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးတွေ့ ရှိခြင်းကြောင့် မြ၀တီ နှင့် သင်္ကန်းညီနောင်ရှိဒေ
သခံ အချို့ကလည်းစိုးရိမ် လျှက်ရှိကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် A(H1N1)ရောဂါကြောင့်သေဆုံးရသူ နှစ်ဆယ့် ငါးယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေများ ဆွေးနွေးမည်
အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်မူကြမ်းတင်ပြရန်နှင့် အမှုကိစ္စဆွေးနွေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၎င်း၏ရှေ့နေများ မနက်ဖြန်တွင် တွေ့ဆုံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
၎င်းက “မနက်ဖြန် ဒေါ်စုနဲ့တွေ့တာကတော့ အဓိကက အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက် ဆွေးနွေးမှာပဲ။ အခုတွေ့ခွင့်တောင်းတာလည်း အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်အတွက်ပဲ ကျနော်တို့တောင်းတာပဲ။ ကျနော်တို့ အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်မှာ ၁၉၇၄ ခု အခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ ပုဒ်မ ၁၅၉ (က) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အချက်ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတချက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်ဆိုတာ တရားရုံးရှေ့မှာ ပြောရတာလေ။ ကျနော်တို့ အခုလက်နက်တွေ ထုတ်ပြလို့ မဖြစ်သေးဘူးနော်။ အဲဒီဥပဒေရှိတာဆိုရင် ဘယ်လို၊ မရှိတာဆိုရင် ဘယ်လို အားလုံးပါမယ်” ဟု ပြောသည်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံနေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမေရိကန်နိုင်ငံသား မစ္စတာယက်တော နေအိမ် အတွင်း ၀င်ရောက်ခဲ့မှုအတွက် နအဖစစ်အစိုးရက မေ (၁၈) ရက်တွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှု ပုဒ်မ (၂၂) ဖြင့် အင်းစိန်အထူးတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား တရားစွဲတင်မှုတွင် နအဖစစ်အစိုးရဘက်က တရားလိုပြသက်သေ (၁၅) ဦး ထွက်ဆိုခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်မှ သက်သေ (၂) ဦးသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်မှ တင်သွင်းခွင့်ရခဲ့သော သက်သေ (၂) ဦးမှာ ရှေ့နေများဖြစ်ကြပြီး တရားရုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ကန့်သတ်ထားသည့် ပုဒ်မ ၁၅၉ (က) သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ဖြစ်နေသည့်အတွက် သက်ဝင်မှုရှိမရှိစဉ်းစားကြရန် သက်သေ (၂) ဦးစလုံးက တင်ပြလျှောက်လဲခဲ့ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်လဲရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းက “၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ အာဏာသက်ရောက်မှု ရှိသေးသလား။ မရှိတော့ဘူးလား။ ဒီဟာက နံပါတ် (၁) အခြေခံတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါက မရှိတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီပုဒ်မ ၁၅၉ (က) ကလည်း သက်ဝင်မှုမရှိတော့ဘူး။ အဲလိုဖြစ်သွားမယ်လေ” ဟု ပြောသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌ အခြေခံရမည့်မူများတွင် ဆိုရှယ်လစ်လူ့ဘောင်တည်ဆောက်ရေး၊ ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေး တည်ဆောက်ရေး၊ တပါတီစနစ် ကျင့်သုံးရေးတို့ ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းချိန်တွင် ထိုအခြေခံမူ များ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ထောက်ပြသည်။
“အဲတော့ စောစောက ပြောတဲ့ အခြေခံမူဆိုတာတွေက တော်တော်ပျက်သွားတာ။ ပျက်သွားတော့ ဒီထဲမှာမှ တခါ ၁၉၉၀ ခုနှစ် တုန်းကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင် ပြောတယ်။ ပြီးတော့လည်း ကြေညာချက် ၁/၉၀ ထုတ်ခဲ့တယ်ဗျာ။ ထုတ်ခဲ့တော့ အဲဒီမှာက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနေအထားကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ပြောတဲ့ စကားနော်။ သူရဲ့မိန့်ခွန်းတွေ ပြန်ဖတ်ရင် ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ ဒီကနေ့တို့လုပ်နေတာ စစ်အစိုးရ (Military Government) တဲ့။ ဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကိုမှ လိုက်နာနေရခြင်းမရှိဘူးတဲ့။ နောက်ပြီးတော့ ကမ္ဘာတခုလုံး ဘယ်မှာကြည့်ကြည့်တဲ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာ ပျက်သွားတာပဲတဲ့။ အသက်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ သူက အဲလိုပြောသွားတယ်” ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
သို့ရာတွင် နအဖစစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စတင်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိတကြိမ်၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိတကြိမ်၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိတကြိမ်၊ စုစုပေါင်း (၃) ကြိမ်စလုံး ထိုဥပဒေဖြင့် အရေးယူထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အင်းစိန်ထောင်အထူးတရားရုံး တရားခွင်တွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယခုရင်ဆိုင်နေရသောအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်မိန့် ၁၅၉ (က) ကို သက်ဝင်စေမည့် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ရှိခြင်း ရှိမရှိဆိုသည့် အချက်အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေများဘက်မှ တင်ပြဆွေးနွေးသွားရန်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
“ပုဒ်မ ၁၅၉ ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု မူလအခွင့်အရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံချက်ရှိစေရမယ်တဲ့။ အဲဒါကို ကန့်သတ်လိုက်တာ။ ကျနော်တို့တင်ပြနေတာ ဘာလဲဆိုတော့ လွတ်လပ်မှု မူလအခွင့်အရေး ကန့်သတ်တာတော့ ထားပါဦး။ ဒါပေမယ့် လုံခြုံရေးဆိုတာကြီးနဲ့ တွဲနေတာ။ လုံခြုံရေးအာမခံချက်။ အာမခံချက်ကလည်း ဒါဟာ ဖွဲ့စည်းပုံက ပေးထားတဲ့အာမခံ။ ဆိုတော့ ဒီအာမခံချက်ကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူရမလဲ။ အစိုးရပေါ့ဗျာ။ အဲလိုတာဝန်ယူရတာ။ အဲဒီတာဝန်ကို ရုပ်သိမ်းလို့ရမလား။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက အစိုးရအာဏာပိုင်ကို ပေးထားတဲ့ တာဝန်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရှိသေးတယ်လို့ ယူဆရင် သူတို့ အဲဒါကို ငြင်းလို့ရလား။ နိုင်ငံသားရဲ့ မူလအခွင့်အရေးကန့်သတ်တာတော့ ထား။ သူ့တို့တာဝန်ကိုတော့ သူတို့ ပြန်ကန့်သတ်လို့ရလား။ အဲဒါပါပဲ” ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ရှင်းပြသည်။
ထိုကဲ့သို့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ စကားရပ်များ၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆိုသည့် နေရာကို စကားရပ်အစားထိုးပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း မရှိသေးကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
၎င်းက “တကယ်တမ်းကျတော့ ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အနက်အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင် ပုဒ်မ ၂၀၀ နဲ့ ၂၀၁ အရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကသာ ဖွင့်ဆိုနိုင်တယ်။ ကျန်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ကို မရဘူး။ အခုက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုတာကို စကားရပ်အစားထိုးတာ မရှိသေးဘူးဗျ။ နိုင်ငံတော်ကောင်စီကို နအဖနဲ့ အစားထိုးတယ်။ ကျန်တာတွေ ကျန်တဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း အဲလိုအစားထိုးတယ်။ သို့သော် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို စကားရပ်များ အစားထိုးခြင်းနဲ့ အစားထိုးတာ မရှိသေးဘူး။ အဲလိုဖြစ်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းအပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးသည့်နောက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကျမှ သာ ၎င်း၏ရှေ့နေများဖြင့် တွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းနှစ် သြဂုတ်လ (၈) ရက်တွင်မှ ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်းနှင့် စတင်တွေ့ဆုံ ခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကမူ ယခုအမှုသည် နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုတခု ဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ထားကြပြီး ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များအား လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။
လာမည့် ဇူလိုင် (၂၄) ရက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုအား နှစ်ဘက်ရှေ့နေများ အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်ပေးရန် အင်းစိန်တရားရုံးက ဇူလိုင် (၁၀) ရက် တရားခွင်တွင် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။
ယခုအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဉာဏ်ဝင်းက “ဒီအမှုက စွဲတောင်မစွဲသင့်တဲ့အမှုမျိုးပါ။ ဘာပြစ်မှုမှ မရှိဘဲ၊ အတင်းစွဲပြီးတော့ ဒါနဲ့ငြိတယ် ဟိုဟာနဲ့ငြိတယ်။ တကယ်တမ်း အဲဒါတွေကလည်း မငြိဘူးလို့ဘဲ ကျနော်တို့တော့ မြင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
နယ်ခြားစောင့်အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စကိုလက်မခံဘဲ မိမိစစ်သားများနှင့်သာ ဖွဲ့စည်းမည့် ကချင်ဒေသလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ် ပြောင်းပြီး နောင် ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သစ်တွင် အာဏာရယူလိုကြောင်း ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) က ပြောကြားလိုက်သည်။
ယခုလ (၈) ရက်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့မှ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဂေါ်ရီဇော်ဆိုင်း ဦးဆောင်သည့် ရှစ်ဦးပါ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့နှင့် မပခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် စိုးဝင်းတို့ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များအရ ၂ဝ၁ဝ ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အစိုးရသစ် လက်သို့ တပ်မတော်အစိုးရ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးသည့်အချိန်တွင် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ အာဏာသုံးရပ် မိမိတို့ ကေအိုင်အိုမှ တိုက်ရိုက်ပါဝင်နိုင်ရေးကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ တင်ပြထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ် (Border Guard Force) အဖြစ် မဟုတ်ဘဲ ကချင်ဒေသ လုံခြုံရေးတပ် (Kachin Regional Guard Force) (KRGF) ဟု အမည်မှည့်ခေါ်ကာ လက်ရှိ ကေအိုင်အေ တည်ရှိနေသော အနေအထားအတိုင်း ထားရှိသွားရန် ဆန္ဒရှိပါကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးလိုပါသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ကေအိုင်အိုမှ ဖွဲ့စည်းလိုသည့် (KRGF) အဖွဲ့တွင် ကေအိုင်အေမှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များဖြင့်သာလျှင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသွား လိုပါကြောင်း တောင်းဆိုထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ (၂၈) ရက်၌ နအဖက ကေအိုင်အိုအဖွဲ့အပါအဝင် ငြိမ်းအဖွဲ့များကို အင်အားလျှော့ချပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးအတွက် ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့နှင့် မပခ အကြား အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယခုနောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကချင်ငြိမ်းအဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော်ကမူ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စကို ဇွန် (၂၄) ရက်တွင် လက်ခံလိုက်ပြီး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရွေးကောက်ပွဲဝင်စရာမလိုဘဲ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တိုက်ရိုက်ခန့်ပေး သည့် လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ငြိမ်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များထဲမှ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။
ယခုတောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နအဖဘက်က မည်သို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်ကို မသိရှိရသေးဘဲ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများကို ဖုန်းအဆက်သွယ် မရရှိပါ။
အဆိုပါ တတိယမြောက် A(H1N1) တုပ်ကွေးဝေဒနာရှင်မှာ အသက် (၅၁) နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်၌ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ Thai Airway လေကြောင်းခရီးစဉ် TG 305 ဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သူတဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့လူတုပ်ကွေးရောဂါသည် တကမ္ဘာလုံးတွင် လူပေါင်း (၁) သိန်းကျော်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတို့တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု များပြားနေကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောဂါကူးစက်မှုမရှိစေရန် ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေးကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ယင်းအတွက် ယခုအချိန်ထိ ရောဂါဖြစ်ပွားသူ (၃) ဦးသာ ရှိသေးကြောင်း၊ ၎င်းတို့မှာလည်း ပြည်ပမှကူးစက်လာသူများသာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် ကူးစက်မှု လုံးဝ မရှိသေးကြောင်း အစိုးရသတင်းစာတွင် ရေးသားထားသည်။
“ပြောတာတော့ ပါးစပ်ရှိရင် ပြောလို့ရတာပဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံကိုတောင် ရောဂါကူးစက်မှု အမြန်ဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ပြောထားသေးတာပဲ။ ပြီးတော့ ဒီရောဂါဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေတာပဲ။ လူက လူကို ကူးစက်တာ။ တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံကို ကူးလူးသွားလာကြတဲ့အခါ ရောဂါပြန့်တာပဲ။ သတင်းစာက ပြောတာက ပြည်တွင်းမှာ မဖြစ်သေးဘူး။ ပြည် ပက ကူးလာတာ ဆိုပြီးတော့ပဲ ပြောနေတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ရှိ မဲဆောက်ဆေးရုံတွင် A(H1N1) ကမ္ဘာ့လူတုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ (၃) ဦး ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူခဲ့သည်ကို မဲဆောက်ဆေးရုံမှ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းရှိ ထိုင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအား လူတုပ်ကွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမားရေး သတိအမြဲရှိရန် နှိုးဆော်ထားသည်။
မဲဆောက်ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်တဦးက “ကျနော်တို့ဆီမှာ လူတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့လူ (၃) ဦး ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ရောဂါပျောက်လို့ ဆေးရုံက ဆင်းသွားပါပြီ” ဟု မဲဆောက်အခြေစိုက် STV ရုပ်သံလှိုင်းသို့ ယမန်နေ့က ပြောကြားသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ မရှိရန်အတွက် ဒေသတွင်းရှိ ထိုင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ဖျားနာမှုများရှိပြီး ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ များတွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင် ချက်ချင်းသွားရောက်ပြသရန် ၎င်းဆရာဝန်က သတိပေးပြောကြားသည်။
မဲဆောက်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့သည့် A(H1N1) ရောဂါဖြစ်ပွားသူ (၃) ဦးမှာ မဲဆောက်ဒေသအတွင်းမှ လူများမဟုတ်ဘဲ ချင်းမိုင်နှင့် ဘန်ကောက်မှ လာရောက်ကြသည့် ဧည့်သည်များ ဖြစ်ကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
မဲဆောက်ဒေသအတွင်း စက်ရုံများတွင် မြန်မာအလုပ်သမား (၁) သိန်းခွဲခန့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ မြန်မာအလုပ်သမား အရေးဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့စည်းများကလည်း လူတုပ်ကွေးရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ပညာပေးမှုများ လိုက်လံဆောင်ရွက်လျက်သည်။
မဲဆောက်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် မယ်တော်ဆေးခန်းတွင် A(H1N1) ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးဝါးကုသမှု လာရောက်ခံ ယူသူ မရှိသေးကြောင်း ဆေးခန်းမှ ဆေးမှူး ဆရာ စောထိုက်ထိုက်က ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ ဆေးခန်းမှာတော့ တယောက်မှ မတွေ့သေးဘူး။ အများစု လာတာကတော့ သာမန် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးတာတွေ၊ ငှက်ဖျား ၀မ်းရောဂါလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သံသယဖြစ်စရာ လူနာတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် မဲဆောက်ဆေးရုံကြီးကို ဆက်လက်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
မက္ကဆီကို နိုင်ငံမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် A(H1N1) တုပ်ကွေးကူးစက်မှုသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌ လူပေါင်း (၁) သိန်းကျော်တွင် ဖြစ်ပွားနေပြီး (၆၀၀) ကျော်သေခဲ့ကြောင်း ECDC အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြသည်။
ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်နေ့အထိ ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းအရ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အဆိုပါ A(H1N1) တုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ (၁၅) ဦး ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင် (၁၁) ရက်နေ့၌ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် မူဆယ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ကို လာရောက်သွားသည့် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးက ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပြီဖြစ်၍ မှောင်ခိုကုန်သွယ်မှု မရှိသင့်တော့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့မှုအပေါ် ကုန်သည်များအကြား ပျက်ရယ်ပြုနေကြသည်။
မည်သည့်လူကြီးလာလာ နယ်စပ်တရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးကို ပိုမိုတိုးတက်အောင် လုပ်ရန်ပြောပြီး မှောင်ခိုကုန်သွယ်ရေးကို တားဆီးသွားရေးအတွက် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောနေခဲ့သော်လည်း အာဏာပိုင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများက ကုန်သည်များအပေါ် ထောက်ထားညှာတာမှုမရှိ၍ မှောင်ခိုကုန်သွယ်ရေး ဖြစ်လာရသည်ကို မသိရှိသယောင် မျက်ကွယ်ပြုနေသည်ဟု သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် ကုန်သည်ကြီးတဦးက ဝေဖန်သည်။
၎င်းက “မှောင်ခိုကုန်သွယ်ရေး ပပျောက်ရေးကိစ္စက အပ်ကြောင်းထပ်နေပြီ။ လိုင်စင်ရဖို့အတွက် နေပြည်တော်အထိ သွားလျှောက်ရတယ်။ တပတ်လောက်ကြာတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ဆိုရင် တလလောက်အထိ ကြာတယ်။ Data base ထဲမှာ မပါတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမို့လို့၊ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေ သူတို့ဆီမှာ မရှိလို့ စုံစမ်းပြီးတဲ့အထိ စောင့်နေရတာ။ အဲလိုဆိုတော့ အချိန်တွေ ကြာပြီး ဈေးကွက်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ မြန်မြန်သွက်သွက် လုပ်ရတော့ မှောင်ခိုသွားနေရတာပါ” ဟု ပြောသည်။
ထိုက်သင့်သော အခွန်အခများပေးပြီး ကုန်ပစ္စည်းများကို လွယ်လင့်တကူ ရောင်းဝယ်တတ်လာစေရန် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ဝန်ထမ်းများက ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ပညာပေးကြရန် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး၏ ပြောဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်သွယ်ရေးကို ဖျက်ဆီးနေသည်မှာ အာဏာပိုင်များသာဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကုန်သည်က ပြောသည်။
“နေပြည်တော်က တိုက်ရိုက်လုပ်တဲ့လိုင်စင်တွေရှိတယ်။ ရမခတိုင်းမှူးရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ လုပ်တာတွေရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှာ အဖြစ်သဘောလောက်ပဲ စစ်တယ်။ ကုန်သွယ်ရေးဇုန် တာဝန်ခံတွေလည်း အဲလိုမျိုးဆို မထိရဲဘူး။ မကိုက်ညီတာတွေ လုပ်လာမှန်းလည်း သိတယ်။ တောင်းစရာတောင် မလိုဘူး၊ ပေးတာယူပြီး ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အခြားကုန်သည်တွေလည်း သိလာတော့ လိုက်လုပ်လာတယ်။ ကာစတန်တွေ တဖွဲ့လုံးဖြုတ်ခဲ့သေးတာပဲ။ ပျောက်သွားတာမှ မဟုတ်တာ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
မကြာသေးမီနှစ်ပိုင်းက ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်အရွယ်အရ စစ်တပ်မှ အနားယူခွင့်ပေးခံထားရသည့် ဗိုလ်မှူးကြီး၊ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးများ၊ ဗိုလ်ကြီးများ အယောက် (၄ဝ) ခန့် မူဆယ်တွင် ရောက်ရှိနေပြီး ငွေကြေးရှင်များက အရင်းအနှီးစိုက်ထုတ်ပေးကာ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် မမှန်ကန်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေကြသည်ဟု ကုန်သည်အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 ရက် 2009 ခုနှစ် 21 နာရီ 23 မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့တွင် ဘိန်းဖြူ ၇၆၁ ကီလိုဂရမ်နှင့် စိတ်ကြွဆေးပြားများ ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးမိကြောင်း ယနေ့ထုတ် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မိုင်းဆတ်မြို့မှ တာချီလိတ်မြို့သို့ မောင်းနှင်လာသည့် နစ်ဆန်း ၆ ဘီးကား (ယာဉ်အမှတ် ၂က/၈၁၅၂၁) ကို တာချီလိတ်ရှိ လွယ်တော်ခမ်း ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးစခန်း၌ မူးယစ်အထူးအဖွဲ့က ရှာဖွေရာမှ အဆိုပါ ဘိန်းဖြူများနှင့် WY စာတမ်းပါ စိတ်ကြွဆေးပြား ၃၄၀၀၀၀ (၃ သိန်း ၄ သောင်း) ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြွေအရေခွံအိတ် ၁၀ အိတ်အတွင်း ထည့်သွင်းထားသည့် စက္ကူဖာ ၁၃ ဖာအတွင်းမှ ဘိန်းဖြူဘလောက်တုံး ၁၂၈၁ (၄၄၈ ဒဿမ ၃၅ ကီလို) နှင့် ဆာလာအိတ် ၇ အိတ်နှင့် သံသေတ္တာ ၃ လုံးအတွင်းမှ ဘိန်းဖြူ ဘလောက်တုံး ၈၉၆ တုံး (၃၁၃ ဒဿမ ၆ ကီလို) နှင့် မြွေအရေခွံ ၂ အိတ်တွင် ထည့်ထားသော WY စာတမ်းပါ စိတ်ကြွဆေးပြားများ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းစာက ဆိုထားသည်။
ဤသည်မှာ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်းက ရန်ကုန်ရှိ အေးရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည့် ကုန်တင်သင်္ဘော တစီးကို ရပ်တန့်ရှာဖွေခဲ့ရာ သစ်လုံးများကြားတွင် ဝှက်ထားသည့် ဘိန်းထုတ်များ (အလေးချိန် ၃၈ ကီလိုဂရမ်) တွေ့ရှိပြီးနောက် အများဆုံး ဖမ်းဆီးရမိခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ယခုဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် ဘိန်းဖြူအရေအတွက်မှာ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသတွင် ယခင်က ဖမ်းဆီးမိခဲ့သည့် ဘိန်းဖြူများထက် အလေးချိန် ပိုမိုများကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက် ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန၏ လက်ထောက် အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည်က မဇ္စျိမကို ယခုလို ပြောသည်။
“အရင်တုန်းက ဖမ်းမိတဲ့ ဘိန်းဖြူတွေက ကီလို ၂၀၀၊ ၃၀၀ ကျော်လောက် ရှိမယ်။ အဲဒါထက်စာရင် ဒီတခါ ဖမ်းမိတာက အများဆုံးလို့ ပြောလို့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး “ဘိန်းဖြူတွေကို ရွှေတိဂံနယ်မြေကို ဖြတ်ပြီးတော့ လာအိုဘက်၊ အဲဒီကနေတဆင့် တခြားနေရာတွေကို ဖြတ်ပြီးတော့ ပို့လေ့ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
အမေရိကန်အစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာ မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ လတ်တလော ထုတ်ပြန်ချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် Methamphetamine ခေါ် စိတ်ကြွဆေးပြားများကို ဒေသတွင်း ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်နေသည့်အပြင် အဓိကထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ပါကိစ္စတန်နိုင်ငံပြီးလျှင် ဒုတိယ အကြီးမားဆုံး ဘိန်းထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး စီမံကိန်းများချမှတ်ကာ ဖမ်းဆီးနေသော်လည်း တဖက်တွင် ဘိန်းစိုက်ခင်းများ သိသာစွာ တိုးမြှင့်လာနေကြောင်း ဦးစိန်ကြည်က ယခုလို မှတ်ချက်ပေးသည်။
“ကျနော်တို့ ပြုစုတဲ့စာရင်းတွေအရ ၂၀၀၈-၀၉ ခုနှစ်မှာ ပိုတိုးလာတယ်။ အပြီးတိုက်ဖျက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ခေတ္တခဏတော့ ရပ်တော့ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ အခိုက်အတန့်တော့ ရှိတယ်။ ပူဖောင်းလိုပေါ့ဗျာ။ တဖက်ညှစ်ရင် တဖက်ဖောင်း ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
တာချီလိတ်တွင် ဘိန်းဖြူအမြောက်အမြား ယခုလို တွေ့ရှိပြီးနောက် ယာဉ်မောင်း စိုင်းထွန်းမြင့်ဦး၊ ယာဉ်နောက်လိုက် စိုင်းဝင်းအောင်နှင့် မူတူးတို့ကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိကာ၊ ကွင်းဆက်တရားခံများကို ဖော်ထုတ်ရေးအတွက် ယခုအခါ ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သတင်းစာက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်း တမူးမြို့ မူးယစ်အထူးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက ယခုလ ၂ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်တွင် တမူးမြို့အထွက် ၃ မိုင်စစ်ဆေးရေးစခန်း၌ စန်းလွင် မောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်အမှတ် ၁က/၅၁၄၇ တိုယိုတာ (ဟိုင်းလပ်) ယာဉ်ကို ရှာဖွေရာ ဆေးပြားတပြားတွင် Pseudoephdrine ၁၂၀ မီလီဂရမ်ပါ Larfast D ဆေးကတ် ၉၈၀၀ နှင့် ဆေးပြားတပြားတွင် Pseudoephdrine ၆၀ မီလီဂရမ်ပါ Acrifed ဆေးကတ် ၄၂၆၈ ကတ်တို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း ဆိုထားသေးသည်။
တရားခံ စန်းလွင်အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ကွင်းဆက်တရားခံများ ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းစာတွင် ဆက်လက် ဖော်ပြထားသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 26 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာနှင့် ထိုင်း နယ်စပ်မြို့များဖြစ်သည့် တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင်၏ တာချီလိတ်ဘက်ခြမ်းတွင် ဂိတ်ဖွင့်၍ နှစ်ဘက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သွားလာသူများကို A (H1N1) တုပ်ကွေးရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း လုံလောက်မှု မရှိသေးကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
“အမှတ် (၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတား ဝက်တုပ်ကွေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရေးစခန်း” ကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ကျန်းမာရေးမှူး တဦး၊ သူနာပြုဆရာမ ၃ ဦးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တဦးက အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာ ၂ ခုနှင့်အတူ တာဝန်ယူ စစ်ဆေးနေသည့်အပေါ် ပြောဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“မနက် ၇ နာရီခွဲကနေ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိ နေ့စဉ်ပေါ့။ ဒီဂျစ်တယ် အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာ ၂ ခုနဲ့ စစ်ဆေးမယ်။ စစ်ဆေးတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူတို့က လူတိုင်းကို မစစ်ဆေးနိုင်ဘူးတဲ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာက တယောက်ကို တိုင်းပြီးလို့ နားထဲကနေ ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ တမိနစ်လောက် စောင့်ရတယ်။ normal ကို ပြန်ရောက်ဖို့ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ တယောက်ချင်း စစ်မယ်ဆိုရင် လူတွေ အများကြီး တန်းစီသွားမယ်ပေါ့။ အဲဒါကြောင့် မင်္သာကာတဲ့လူတွေကိုပဲ အဓိကထား စစ်တာပေါ့” ဟု စစ်ဆေးမှုအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သူ တာချီလိတ် မြို့ခံက ပြောသည်။
တာချီလိတ်ဘက်မှ မယ်ဆိုင်ဘက်သို့ တနေ့လျှင် ပျှမ်းမျှ ၂ဝဝဝ ဦးခန့် ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် နီးစပ်သူ အခြားမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
တာချီလိတ်မြို့ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်ကြီးတဦးကမူ နိုင်ငံခြားသားများအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် ဖြတ်ကျော်နေသူ လူတိုင်းကို နေ့စဉ် စစ်ဆေးနေကြောင်းသာပြော၍ ဖုန်းချသွားသည်။
သို့သော် တာချီလိတ်မြို့ခံကမူ မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် တာချီလိတ်မြို့သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများကို စစ်ဆေးခြင်း မတွေ့ရကြောင်း ပြောသည်။
“ထူးခြားတာက ယာဉ်တွေနဲ့ဝင်တဲ့လူတွေကို စစ်တာမတွေ့ဘူး။ တခါတလေ နိုင်ငံခြားသားတွေပါမယ်၊ ယိုးဒယားတွေပါမယ်။ နောက် ဘတ်စ်ကား ၂ ထပ်ကားကြီးတွေနဲ့ လူ ၄ဝ-၅ဝ အဲဒီလိုမျိုး ဝင်လာတဲ့အခါမျိုး။ သူတို့ကလည်း ပြောတယ်၊ ယာဉ်ပေါ်မှာ ပါတဲ့လူတွေကို စစ်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး အချိန်ကြန့်ကြာတာပေါ့ အကိုရာ။ အားနာတဲ့အပိုင်းတွေလည်း ပါတာပေါ့ဗျာ” ဟု သူက ပြောသည်။
A (H1N1) တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားသူ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တွေ့ရှိပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့က ဆန်ဆိုင်း ရပ်ကွက်အတွင်း၌လည်းကောင်း၊ ယမန်နေ့က ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်၌လည်းကောင်း ကျန်းမာရေးမှူးနှင့် သူနာပြုဆရာမများ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ဝင်များ ဦးစီး၍ ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
စာသင်ကျောင်းများတွင်မူ ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိသေးဘဲ ရောဂါပိုးကာကွယ်ရေး မျက်နှာဖုံးစွပ်များကို အသုံးပြုမှုသည်လည်း နည်းပါးသေးသည်ဟု သိရသည်။
တာချီလိတ်မြို့မှ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့သို့ နေ့စဉ် သွားရောက်နေသူများသည် ချစ်ကြည်ရေးတံတားလမ်းကြောင်း တခုတည်း ကိုသာ သုံးခြင်းမဟုတ်ပဲ “ခိုးကူး” လမ်းများမှလည်း ဖြတ်သန်းသွားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ခိုးကူးလမ်းများတွင်မူ တုပ်ကွေးရောဂါ ရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုများ မရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် A (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါတွေ့ရှိသူ ၃ ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူမှ ပြန်လာသူ အမျိုးသမီးငယ် တဦးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာသူ အမျိုးသား နှစ်ဦးတို့ ဖြစ်သည်။
ယင်းတို့ ၃ ဦးမှ နှစ်ဦးမှာ အဖျားမရှိတော့ဘဲ နောက်ဆုံးတွေ့သည့် အသက် ၅၀ အရွယ် အမျိုးသားမှာမူ ဝေဘာဂီအထူးကု ဆေးရုံ သီးသန့်လူနာခန်း၌ ထားရှိ၍ ဆက်လက်ကုသနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“လူနာနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သော မိသားစုဝင် ၉ ဦး၊ လူနာ၏ ယာဉ်မောင်းမိသားစုတို့အား နေအိမ်တွင်ပင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိကြောင်း၊ လူနာနှင့်အတူ စီးနင်းလိုက်ပါလာသော လေယာဉ်စီခရီးသည် နိုင်ငံသား ၈၄ ဦး၊ နိုင်ငံခြားသား ၁၃၆ ဦးတို့ ကိုလည်း လိုက်ခံရှာဖွေ၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိကြောင်း” သတင်းစာက ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၀၀ ကျော်တွင် A (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၉ သောင်းကျော်ရှိပြီး သေဆုံးသူ ၄၀၀ ကျော် သွားပြီဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယင်းရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၅ ဦး ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 ရက် 2009 ခုနှစ် 21 နာရီ 03 မိနစ်
“ပန်ဆေး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က ဆရာလှမျိုးတဲ့၊ သူ့တပည့်ရယ်၊ နောင်မတာရွာကို ရောက်လာတယ်။ (နန်း) ဖေါင်ခမ်းနဲ့ စိုင်းအိုက်မွန်က ဖေါင်ခမ်းရဲ့ အိမ်ရှေ့ စကားရပ်ပြောနေတယ်။ သူတို့ကို စစ်လားဆေးလား လုပ်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်း ဗမာလို မတတ်ဘူး။ စကားမတတ် ဆူညံဆူညံဖြစ်တော့ အိမ်ထဲကနေ ဖေါင်ခမ်းရဲ့ အမေက ပြေးထွက်လာတယ်။ သူ့အမေကလည်း စကားမပေါက်တော့ အိမ်ဘေးနားက နန်းမိုကို အကူအညီ တောင်းပြီး ဘာသာပြန်ခိုင်းနေတာ” ဟု အစချီကာ အခင်းဖြစ်ပွားပုံကို မိသားစုဝင်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထိုသို့ ဘာသာပြန်ဖြင့် အစစ်အဆေး လုပ်နေစဉ် ၎င်းတို့အနား ဆိုင်ကယ်စီးလာသူ အိုက်ပီးဆိုသူကိုလည်း တားဆီး၍ စစ်ဆေးမှု လုပ်ခဲ့ပြန်သည်။
မိသားစုဝင်က “အိုက်ပီးကို တားပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးမှ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ မသိဘူး၊ သေနတ်ဒင်နဲ့ အိုက်ပီးကို ရိုက်လိုက်တာ။ ပြီးတော့ ဖေါင်ခမ်းကို လှည့်ပြီး ပစ်ချလိုက်တာ” ဟု ရှင်းပြသည်။
သေနတ်သံကြားသဖြင့် ရွာသားများ ဝိုင်းအုံလာရာ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင် လှမျိုး (မြန်မာစစ်တပ် စစ်မှုထမ်းဟောင်း) နှင့် တပည့်တို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံဘက် နောင်တောင်းဘက်သို့ ထွက်ပြေးသွားကြောင်းနှင့် ပစ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ယခုလအတွင်း မူဆယ်ခရိုင် ကြူကုတ်-ပန်ဆိုင်းမြို့နယ်ရှိ နမ့်တောင်းရွာတွင် ကြူကုတ် ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် ဟန်ထွန်းအောင်က လူငယ် ၂ ဦးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည့် အမှုအခင်းလည်း ဖြစ်သွားခဲ့သေးသည်။
အာဏာပိုင်များက ဒေသလုံခြုံရေးအတွက် ဟုဆိုကာ ဒေသတွင်း အခြေစိုက် စစ်တပ်စခန်းများတွင် ပြည်သူ့စစ် သင်တန်းများပေးကာ လက်နက် တပ်ဆင်ပေးခဲ့သော်လည်း သာမန် အရပ်သားများအပေါ် မကြာခဏ ဆိုသလို အနိုင့်အထက် ပြုကျင့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 25 မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် A (H1N1) ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရသူ နှစ်ဦးကို တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟူသော ပြောဆိုမှုသည် တကယ်ကူးစက်နေသည့် ပမာဏနှင့်ယှဉ်လျှင် `အကင်း´မျှသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် နောက်ထပ် ကူးစက်ခံနေရသူ အများအပြားရှိနိုင်သည်ဟု အမေရိကန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတဦးက ပြောသည်။
တိုင်းပြည်၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ဆိုးရွားနိမ့်ကျလှသည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ် အခြေအနေကိုကြည့်၍ ထိုသို့ ရှာဖွေဖော်ထုတ်မတွေ့ရှိရသေးသော ကူးစက်ခံနေရသူ အများအပြား ရှိနေဦးမည်ဟု ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဂျွန်ဟော့ကင်း ဘလွန်းဘတ်ခ် တက္ကသိုလ်၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဌာန သုတေသီ ဒေါက်တာ Voravit Suwanaichkij က ပြောသည်။
''ကူးစက်ခံနေရသူ လူနာနှစ်ယောက် တွေ့တယ်ဆိုတာ ရေခဲတောင်ကြီးရဲ့ ရေပေါ် ပေါ်နေတဲ့ အပိုင်းလေက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပဲ ကူးစက်ခံရပြီး ကူးစက်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုမှုမခံရ၊ ကုသမှုမခံရတဲ့ လူနာတွေ အများအပြား ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်'' ဟု ဒေါက်တာ ဗစ် က ပြောသည်။
A (H1N1) အမျိုးအစား ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ဒုတိယလူနာကို သီးခြားခွဲထား၍ ကြပ်မတ်ကုသပေးနေခဲ့ပြီး ယခုအခါ သက်သာလာပြီဖြစ်ကာ မကြာမီ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံကြီးမှ ပြန်လည်ဆင်းနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာစစ်အစိုးရထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
ထိုသတင်းစာ၏ အဆိုအရ အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ်ရှိ ထိုအမျိုးသားလူနာကို ဖျားနာ၍ ချောင်းဆိုးနေသည်ကို တွေ့ရှိပြီးနောက် ယခုလ ၈ ရက်နေ့က ဝေဘာဂီဆေးရုံသို့ တင်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် ဆေးကုသမှု ကောင်းစွာ ခံယူပြီးနောက် ''သူသည် အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ကတည်းက အဖျားမရှိတော့ကြောင်းနှင့် သူ၏ တိုးတက်မှုကို ကာလတခု စောင့်ကြည့်ပြီးနောက် ဆေးရုံမှ ပြန်လည်ဆင်းသက်နိုင်ရန် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း'' သတင်းစာတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသားမှာ စစ်အစိုးရက A (H1N1) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရသည်ဟု တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းခံရသော ဒုတိယလူနာဖြစ်ပြီး အစောပိုင်းကလည်း အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ရှိ မိန်းကလေးငယ်တဦးမှာ ထိုသို့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံနေရသည်ဟု အတည်ပြုကြေညာခြင်းခံခဲ့ရပြီး ရန်ကုန် အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးတွင် သီးသန့်ခွဲထားကာ ကုသမှုခံယူခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ မိန်းကလေးကို နောက်ပိုင်းတွင် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။
သို့သော် ဤသို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် A (H1N1) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေ့ရှိသူနှစ်ဦး တွေ့ရှိသည်ဟု ကြေညာခြင်းသည် ''မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်၌ ချို့ယွင်းအားနည်းချက် အများအပြားရှိနေသည်ကို ညွှန်ပြနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်'' ဟု ဒေါက်တာဗစ်က ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရသည် တနှစ်လျှင် လူတဦးအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စရိတ်အဖြစ် အမေရိကန် တဒေါ်လာအောက်သာ သုံးစွဲနေပြီး၊ ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက် အများအပြားရှိနေသည့် စီးပွားရေးမူဝါဒများကလည်း တိုင်းပြည်ကို ဆင်းရဲတွင်း နက်သနက်အောင် တွန်းပို့လျက်ရှိသည်ဟု သူက ပြောသည်။
''မြန်မာနိုင်ငံက သာမန်မိသားစုတစုရဲ့ ၀င်ငွေ လေးပုံသုံးပုံလောက်ကို အစားအစာအတွက် သုံးနေရတဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်ရင် ကျန်းမာရေးတို့၊ ပညာရေးတို့ အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂလိကပညာရေးတို့လို ဇိမ်ခံစရာတွေအတွက်က ရှားရှားပါးပါး နည်းနည်းပဲ ကျန်တော့တယ်'' ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေ့ရှိသည်ဟု ကြေညာခဲ့သော လူနာနှစ်ဦးလုံးမှာ ရန်ကုန်မြို့မှဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကောင်းကောင်းရနိုင်သူများဖြစ်ကာ စီးပွားရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း အလွန်အမင်း အကန့်အသတ်ကြီးသည့် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပ နယ်မြို့များတွင် နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ကာ ဆင်းရဲတွင်းလည်း နက်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများပြီး ရှာဖွေဖော်ထုတ်၊ တွေ့ရှိနိုင်ခြင်း မရှိဘဲလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒေါက်တာဗစ်က ပြောသည်။
ထို့ပြင် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံက အဆိုပါ တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံနေရကြောင်း အတည်ပြုကြေညာထားသည့်အတွက် နှစ်နိုင်ငံအကြား အလွယ်တကူ ကူးသန်းသွားလာနိုင်သည့် နယ်နိမိတ်ရှိခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်ပွားမှု ထို့ထက်ပို၍ များနိုင်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများနှင့် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားသူပုန်တို့အကြား တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်ရင်းကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသူများအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပင် လူကြိုက်များသော နေရာဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် လေယာဉ်မစီးဘဲ ကုန်းလမ်းကသာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်ကြသူများဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာဗစ်က ပြောသည်။ ထိုသို့ သွားလာရာတွင် အာဏာပိုင်များ မသိအောင် ရှောင်တိမ်းသွားလာရသည့်အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံနေရသည်ကို ထုတ်ဖော်မသိရှိလိုက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းလည်း များပြားသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
သို့သော် မြန်မာအစိုးရကမူ သူတို့၏ အာဘော် သတင်းစာထဲတွင် အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်မှုကို သေချာစွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာလျက်ရှိရာ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၀၁၀၃၉ (၂ သန်းကျော်) ကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုအထဲတွင် လေဆိပ်မှ ၀င်ရောက်သည့်ခရီးသည် ၈၆၆၈၆ ဦး၊ ဆိပ်ကမ်းမှ ၀င်ရောက်သူ ၆၇၅၃ ဦး၊ နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ၀င်ရောက်သူ ၁၉၀၇၇၈၀ ကို စစ်ဆေးခဲ့ကာ၊ ထိုစစ်ဆေးမှုများကို ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။
''ဧပြီ ၂၈ မှ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်အထိ အဖျားလက္ခဏာရှိပြီး တုပ်ကွေးပိုး ကူးစက်ခံထားရသည်ဟု မသင်္ကာသူပေါင်း ၁၅၀၀၉ ဦးကို ဟိုတယ်များနှင့် နေအိမ်များတွင်ထား၍ သေချာစွာ စောင့်ကြည့်အကဲခတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအထဲမှ စောင့်ကြည့်အကဲခတ်မှုကာလ ၁၀ ရက် လွန်မြောက်သွားသူပေါင်း ၆၁၈၄ ဦးရှိကြောင်း'' ဖြင့် သတင်းစာတွင် ရေးသားထားသည်။
ထိုသို့ ကပ်ရောဂါတခုကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ရေရှည်နှင့် လူထုတရပ်လုံးအတွက် ကောင်းမွန်သော ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်တရပ်ကို အစားထိုးနိုင်မည့်အရာ မရှိကြောင်းဖြင့် ဒေါက်တာဗစ်က ပြောသည်။
ကောင်းမွန်သည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည်သာ လူတိုင်း လက်လှမ်းမီနိုင်သည့် အရာဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်တွင် ရန်ပုံငွေလုံလောက်စွာရှိရမည်၊ သေချာစွာ မွေးမြူလေ့ကျင့်ပေးထားသည့် ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများ ရှိရမည်၊ ကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းများ ရှိရမည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကို လွတ်လပ်စွာ ကောက်ယူ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၊ ဖြန့်ဖြူးနိုင်စွမ်းလည်း ရှိရမည်။
သို့သော် ကုသ၍ရသော ရောဂါများဖြစ်သည့် အဆုတ်နာ တီဘီရောဂါနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါ ကဲ့သို့သော ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွင် `အစဉ်အလာ´ စိန်ခေါ်မှုတရပ်ဖြစ်နေသည့် ရောဂါများကိုပင် နိုင်နင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူအများ အဓိကထား စားသုံးကြသည့် လက်ဖက် ကဲ့သို့သော အစားအစာများတွင်ပင် တရားမ၀င် ဆိုးဆေးများ ပါဝင်နေသေးသည်ကိုကြည့်လျှင် ကမ္ဘာ့လူတုပ်ကွေးရောဂါ အပါအ၀င် အနာဂတ်တွင် ကြုံရမည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကိုလည်း နိုင်နင်းစွာ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည့် အလားအလာ မရှိလှကြောင်း ပြဆိုနေသည်ဟု ဒေါက်တာဗစ်က ပြောသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 21 မိနစ်
''ကျနော်တို့ သောကြာနေ့မှာ အစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတာ အတည်ပြုနိုင်ပေမယ့်၊ အခုထက်ထိတော့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းနေတုန်းပါပဲ'' ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခုနှစ် မေလဆန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံသား တဦးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသည့် နေအိမ်အတွင်း အင်းယားကန်ထဲမှ ရေကူးဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် စွပ်စွဲကာ သူမကို တရားစွဲဆိုလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စွဲဆိုချက်များအပေါ် ခုခံချေပသွားရန်အတွက် စာမျက်နှာပေါင်း ၂ဝ ပါဝင်သည့် နောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက်တခု ၎င်းတို့ ရှေ့နေများအဖွဲ့က ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
''ဒါက ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက် မူကြမ်းပါ။ ဒါကို ဒေါ်စုကို ပြပါမယ်။ သူက ပြင်ဖို့လိုအပ်တာ တွေ့တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က ပြုပြင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု သူက ဆိုသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင် အပြစ်မရှိကြောင်း သက်သေပြရန်နှင့် စွပ်စွဲချက်ကို ငြင်းပယ်မည့် အဆိုပါ လျှောက်လဲချက်တွင် မည်သည့်အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်ကို အသေးစိတ် ပြောဆိုရန် သူက ငြင်းဆိုသည်။
အကယ်၍ ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လျှင် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်အထိ ကျခံရဖွယ်ရှိသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွန်ခဲ့သည့် ၁၉ နှစ်အတွင်း ၁၃ နှစ်ထက်မနည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံခဲ့ရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း မရှိပါက စစ်အစိုးရ အဆိုပြုထားသည့် ၂ဝ၁ဝ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ဆိတ်သုဉ်းနေလိမ့်မည်ဟု နယူးယောက်တွင် မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောဆိုခဲ့သည်။
မစ္စတာဘန်သည် ယခုလ အစောပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂ ရက်ကြာ ခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့ရာ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ပြုရန် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ငြင်းပယ်ခဲ့သည့်အပေါ် အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်မိကြောင်း ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ယခုတပတ် တနင်္လာနေ့တွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မစ္စတာဘန်၏ ရှင်းလင်းပြောဆိုချက်အပြီး ကုလဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေက မြန်မာစစ်အစိုးရသည် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် အကျဉ်းသားများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသည့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း လွှတ်ပေးမည့် အကျဉ်းသားများအနက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မည်ရွေ့မည်မျှ ပါဝင်မည်နှင့် ထိုအထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်မည်လားဆိုသည်ကို ဖော်ပြပြောဆိုသွားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
သို့သော် အန်အယ်ဒီ ခေါင်းဆောင်များကမူ စစ်အစိုးရ၏ ကြေညာချက်အပေါ် အယုံအကြည် ကင်းမဲ့ကြောင်းနှင့် ဤသည်မှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန်အတွက် တခြားသော ပရိယာယ်တခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
''ဒီကြေညာချက်အပေါ် ကျနော်တို့အနေနဲ့ အများကြီး မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ (အာဏာပိုင်များ) က အစောပိုင်းတုန်းက အကျဉ်းသား ၉ ထောင်ကျော် လွှတ်ခဲ့တဲ့အခါ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားက ၃ဝ လောက်ပဲ ပါခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီတခေါက်မှာ အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ'' ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 ရက် 2009 ခုနှစ် 15 နာရီ 26 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ လျှပ်စစ် လိုအပ်ချက် များနေသော မန္တလေးမြို့တော် လျှပ်စစ်မီး တိုးမြှင့်ပေးရေး အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၃၀၀ ဝယ်ယူလိုက်သည်။
“လျှပ်စစ်က ဝယ်ပြီးပြီလို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်နေ့ရမယ် ဆိုတာတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ မန္တလေးတိုင်း လျှပ်စစ်ဌာန တိုင်းဦးစီးမှုး ဒေါ်အေးအေးမင်းက တော့ အဲလိုပြောပါတယ်။ ”ဟု မန္တလေး စက်မှုဇုန် တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
ယင်းလျှပ်စစ် ဓာတ်အားကို လျှပ်စစ် အလုံအလောက် မရသည့် မန္တလေး စက်မှုဇုန် အပါအဝင် မန္တလေး မြို့တော်ကိုပါ ဖြန့်ဝေပေးမည် ဖြစ်သည်။
တရုတ် နိုင်ငံ ရွှေလီမှ လျှပ်စစ် ဝယ်ယူပြီးပါက လက်ရှိ တရက် ၅ နာရီ လျှပ်စစ် ရနေသည့် မန္တလေး စက်မှုဇုန်ကို ၁၀ နာရီခန့် တိုးပေးနိုင်မည်ဟုလည်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားသည်။
လျှပ်စစ် သုံးစွဲအား ၄၀ မဂ္ဂါဝပ် ရှိနေသော မန္တလေး စက်မှုဇုန်တွင် လက်ရှိ လျှပ်စစ် ၂၀ မဂ္ဂါဝပ်သာ လျပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနက ဖြန့်ဝေပေးနိုင်သည်။
မန္တလေး စက်မှုဇုန်က တိုးမြှင့် ရရှိလာမည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား အတွက် ကျပ်သိန်း ၃၀၀၀ ခန့် ကုန်ကျမည့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားလိုင်း တခု ဆောက်လုပ်ရန် စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
စိန်ပန်းစက်မှုလုပ်ငန်း ရပ်ကွက်ကို ပြောင်းလဲလိုက်သည့် မန္တလေး စက်မှုဇုန် တည်ထောင်ပြီး ၁၀ နှစ် အတွင်း ပထမ ၃ နှစ်သာ လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန် ရရှိပြီး နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် တရက် ၅ နာရီသာ ရရှိသည်။
“လျပ်စစ်မီး ရတဲ့ အနေအထားကတော့ မနက် ၇ နာရီကနေ နေ့လည် ၁၂ နာရီကို တဖွဲ့ ပေးတယ်။ နေ့လည် ၁၂ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီကို တဖွဲ့ ပေးတယ်”ဟု ယင်းစက်မှုဇုန်ီ ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဆွေက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိ စက်မှုဇုန်တွင် လျှပ်စစ် တယူနစ် ၅၀ ကျပ် ကျသင့်နေသော်လည်း တရုတ်မှ လျှပ်စစ်ဖြန့်ပါက ကျသင့်မည့် မီတာခကိုမူ မသတ်မှတ်သေးကြောင်း စက်မှုဇုန်မှ စုံစမ်းသိရသည်။
စစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၁၀ ခုကို တရုတ်တို့ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ယခု ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တရုတ်ထံမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပြန်လည် ဝယ်ယူလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ၂၄ နာရီအပြည့် မီးလာမည်ဟု စစ်အစိုးရက ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်မှအပ ရန်ကုန်မြို့ အပါအဝင် မြို့ကြီးများမှာ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှု အလွန် များပြားနေဆဲ ဖြစ်သည်။
မီးလာချိန် တိုးမြင့်လာသော လက်ရှိ ကာလတွင်ပင် မြို့တော်ဟောင်း ရန်ကုန်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၆ နာရီကြာ မီးပြတ်ပြီး မီးစက်သံများ တညံညံ၊ မီးခိုးတလူလူနှင့် နေထိုင်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
Thursday, 16 July 2009 19:44 သဲသဲ .သရုပ်ဆောင်လောကတွင် အရှိန်ရလာသည့် မိုးဟေကို၏ မကြာသေးမီက ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စင်တင်ဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကြားထဲတွင် ခေတ်စားလျက်ရှိသည်။
စနေနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လန်ဒန်မြို့ ဖျော်ဖြေပွဲတွင် မိုးဟေကို နှင့် ကချေသည် ၂ ဦး တင်ဆက်သွားပုံမှာ နာဂစ် မုန်တိုင်း ရန်ပုံငွေပွဲ ဆိုသည့်အတိုင်းပင် မုန်တိုင်း ကျရောက်နေသကဲ့သို့ အုန်းအုန်းကျွက်ကျွက် တင်ဆက်သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
မိုးဟေကိုက စကပ်တိုတို၊ အသားကပ်ဘောင်းဘီတို့ကို ဝတ်ဆင်ထားသော်လည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် တင်ဆက်သည့် ပွဲဖြစ်သောကြောင့် အဆင်ပြေပါသည်ဟု ပရိသတ်တဦးက ပြောသည်။
“သူ့ကို sexy ဖြစ်တဲ့သူလို့ မမြင်ဘူး။ အင်္ဂလန်လို နေရာမျိုးမှာ ဖျော်ဖြေတဲ့ပွဲ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့နေရာနဲ့သူ သင့်တော်တဲ့ ဖျော်ဖြေမှုမျိုးနဲ့ အကောင်းဆုံး တင်ဆက်သွားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ပရိသတ်တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင် ရန်ကုန်မှ ထင်ရှားသည့် အဆိုတော်များ ဖြစ်ကြသော အဲလက်စ်၊ တင့်တင့်ထွန်း၊ ရေဗက္ကာဝင်း၊ J- Me တို့ ပါဝင်သော်လည်း မိုးဟေကို၏ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများသာ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကြားတွင် ရေပန်းစားနေသည်။
လူသုံးများသော အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်သည့် YouTube တွင်လည်း မိုးဟေကို၏ ကပြ၊ သီဆိုမှုကို တွေ့နိုင်သည်။
“ရန်ကုန်မှာထက်စာရင် လန်ဒန်မှာ ဖျော်ဖြေသွားတာ ပိုပြီးတော့ ကြည့်ကောင်းတယ်” ဟု YouTube မှတဆင့် စတိတ်ရှိုး ကြည့်သည့် ပရိသတ်တဦးက မှတ်ချက်ပေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ပရိသတ်တဦးကလည်း “ဒါ သူ့အသံလား၊ ကောင်းသားပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ကရမယ် ဆိုတာ သူ မသိဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ဂီတလောကသို့ ဝင်ရောက် ခြေစမ်းလေ့ရှိသည့် မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်များတွင် အမျိုးသား ပရိသတ်ကို ညှို့အားကောင်းကောင်းဖြင့် ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် မိုးဟေကိုလည်း တယောက် အပါအဝင်ဖြစ်လာသည်။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသည့် “မာစတာသင်္ကြန်” စီးရီးတွင် ပါဝင် သီဆိုခဲ့သည်။
မန္တလေးဇာတိ မိုးဟေကိုသည် ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်မှ စတင်ပြီး မော်ဒယ်တဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် သရုပ်ဆောင်တဦး အဖြစ်လည်း ရပ်တည်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
မိုးဟေကိုသည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းမှစပြီး အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ပျံ့နှံ့လာသည့် ဗီဒီယိုကလစ်တခုကြောင့် ပရိသတ်က ပိုမို သတိထားမိသည့် မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်လာသည်။
YouTube တွင် တွေ့ရသည့် စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲ
Thursday, 16 July 2009 20:14 ရန်ပိုင် .ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO က စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ကချင်ဒေသလုံခြုံရေးတပ် အဖြစ် ဖွဲ့စည်းရန် တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးဝင်း နှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ ၌ တွေ့ဆုံရာတွင် တင်ပြခဲ့ ကြောင်း ဧရာဝတီက ရရှိထားသည့် KIO ၏ အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေသော KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ (ဓာတ်ပုံ - Yan Libre)
ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကို ကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးတပ် ဟု အမည်ပြောင်းလဲပြီး လက်ရှိအနေအထား အတိုင်းထား ရှိသွားရန် နှင့် ကချင်လူမျိုးများ နှင့်သာဖွဲ့စည်းသွားရန် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
KIA အသွင်ပြောင်းရေး ကိစ္စ သာမက ၊ အခြားသော ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ကိစ္စများကိုပါ ဆွေးနွေး လိုကြောင်း တင်ပြထားသည်ဟု လည်းသိရသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရ က ပါတီအသွင်ဖြင့် ပြောင်းလဲပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန် တိုက်တွန်း ထားသော်လည်း KIO အနေဖြင့် ပြဿနာများ ကို မဖြေရှင်းနိုင်သည့် အပြင်၊ ကချင်အမျိုးသား အများစု ဆန့်ကျင်လာ မည်ကို မလိုလားသော ကြောင့် ငြင်းပယ်ထားသည်၊၊
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြင့် ပေါ်ပေါက် လာသည့် အစိုးရ လက်သို့ စစ်အစိုးရမှ အာဏာလွှဲပြောင်းသည့် အချိန်တွင် ကချင် ပြည်နယ် အစိုးရ အာဏာ သုံးရပ် ၌ KIO တိုက်ရိုက် ပါဝင်နိုင်ရေး ကိုလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ ထားကြောင်း ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့က တင်ပြသည့် အစီရင်ခံစာ အရ သိရသည်။
စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ စည်းပုံမှာ တပ်ရင်းတရင်းတွင် အင်အား ( ၃၂၆ ) ဦး ရှိပြီး ၊ နအဖ အရာရှိ ၃၀ ခန့်ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ KIA တွင် အင်အား ၄၀၀၀ ခန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားပြီး တပ်မဟာ ( ၅ ) ခု ၊ လှုပ်ရှား တပ်မ ( ၁ )ခု တို့ ကို ကချင်ပြည်နယ် ဒေသ အတွင်းတွင်သာမက၊ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ များအတွင်းတွင် အခြေပြုချထားသည်။
KIA သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရ နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဖြစ်သည်၊၊
လေ့လာသူများအဆိုအရ စစ်အစိုးရသည် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များကို စစ်တပ်လက်အောက်သို့ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အနာဂတ်တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများ အားနည်းသွားစေရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည် ဇွန်လအတွင်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့် မှ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ အသွင်ပြောင်းရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ၀ နှင့် ကိုးကန့်၊ NDA – K အပစ်ရပ်အဖွဲ့ များကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ ပြီး ဇွန်လ ( ၃၀ ) ရက် နေ့တွင် နောက်ဆုံး အကြောင်းပြန် ရန်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိ အခြေအနေ တွင် DKBA နှင့် ဦးဇခုန်တိန်ယိန်း ခေါင်းဆောင်သော ကချင်အထူးဒေသ ( ၁ ) NDA – K မှ လွဲ ပြီး ၀ နှင့် KIA အပါအ၀င် အခြားအဖွဲ့များကလက်မခံပေ။
နယ်ခြားစောင့်တပ်များ သည် လက်ရှိ ထိန်းချုပ်ထား သည့် နယ်မြေတွင် သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဟု သိရသည်။
Thursday, 16 July 2009 19:56 သန်းထိုက်ဦး .ထိုင်းနိုင်ငံတွင် A(H1N1) ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ရှိ ပညာသင်ကြား နေသော မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
မဲဆောက်မြို့ရှိ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားနေသည့် စာသင်ကျောင်းများတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေ သော ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ကြိုတင်ပညာပေးမှုများ ယခုပတ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ဟု မဲဆောက်အခြေစိုက် မယ်တော်ဆေးခန်းမှ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“လက်ရှိ အနေအထားကျတော့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်နေကြတာကတော့ နှစ်ပတ် သုံးပတ်လောက် ရှိနေပြီ၊ ဒါကတော့ မိုးတွင်းဆိုတော့ ဖြစ်နေကျပဲ၊ ပုံမှန် ကာကွယ်မှုတွေတော့ လုပ်နေကြတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“ကျောင်းတွေမှာရော ဒီရောဂါ ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုမဖြစ်အောင် အရင်လုပ်ရမယ်၊ တဦးချင်းစီရဲ့စိုးရိမ်ရမှုဆိုတာကတော့ ပြင်း ထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေတွေ့မှပဲ ထိုင်းကျန်းမာရေးဌာနနဲ့စေ့စပ်ပြီးတော့ လုပ်ကိုင်သွားမယ်”ဟု ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် က ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ မယ်တော်ဆေးခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း NGO များ ပူးပေါင်း၍ ယခုရက်ပိုင်း အတွင်း ကျောင်းများတွင် လိုက်လံ ဆောင်ရွက်ပေး နေကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်း စုစုပေါင်း ၄၃၀ ကျော်ကို ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှ ၁၉ ရက်နေ့အထိ ပိတ်ထားကြောင်း ထိုင်းသတင်းများအဆိုရ သိရသည်။
နိုင်ငံတကာ ဧည့်သည် အဝင်အထွက် အလွန်များပြားသော အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် A (H1N1) ဝက်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူ ၄၄၀၀ ကျော်ရှိပြီး သေဆုံးသူ ၂၅ ဦးရှိကြောင်း ထိုင်းကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ ယနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်များ အရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နှင့် ကပ်လျက် တည်ရှိသော မဲဆောက်၊ မယ်လမ၊ ဖုတ်ဖရ စသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းရှိမြို့ ၃ ခု တွင်မြန်မာ ပြည်သား အလုပ်သမားများ၏ သားသမီးများ အတွက် ဖွင့်ထားသော စာသင်ကျောင်း အများအပြားရှိသည်။
မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက် ပညာရေးဌာန(BMWEC)၏ စာရင်းများအရ ကျောင်းပေါင်း ၆၂ ကျောင်းရှိသည် ဟု ဆိုသည်။ BMWEC နှင့် တရားဝင် အဆက်အသွယ် မပြုရသေးသည့် ကျောင်းတချို့လည်း ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ယင်း စာသင်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားများအတွက် လက်ရှိအခြေအနေမှာ စိုးရိမ်မှု မရှိသေးသော်လည်း စိုးရိမ်မှုထက် ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းက ပိုမိုအရေးကြီးသည် ဟု BMWEC ပညာရေးဌာန ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဆရာမကြီး နော်ဖောရေက ပြော သည်။
“ကျမတို့အခုသိရသလောက် သူတို့ ထိုင်းကျောင်းတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ထိုင်း လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေထဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စ ကို သူတို့ ကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ဟာ သူတို့တောင်မှ နေရာတိုင်းကို မရောက်ဘူး၊ ကျမတို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ ကျမတို့အတွက်ကတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့”ဟု သူက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ A (H1N1) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို အာဏာပိုင်များက ပထမဆုံး ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းခလေး တဦးတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီး မဲဆောက်မြို့သို့အ၀င် ထိုင်းနိုင်ငံ စစ်ဆေးရေးဂိတ်၌ ရောဂါရှာဖွေရေး စက်ပစ္စည်းများ တပ် ဆင် ထားကြောင်း ၎င်း နယ်စပ်ဂိတ်မှ တာဝန်ကျသူ တဦးအဆိုရ သိရသည်။
အဆိုပါ A (H1N1) ရောဂါသည် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၇ နိုင်ငံသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခဲ့ကာ ၇၁ ရက်အကြာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စတင်တွေ့ ရှိ ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတဦး A (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ထပ်မံတွေရှိ ကြောင်း ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့က စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ပြန်လာသော အသက် ၁၃ နှစ် အရွယ်ကျောင်းသူ တဦးထံ၌ A(H1N1) ရောဂါပိုး စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၃ ဦးရှိပြီဖြစ်သည်။
Thursday, 16 July 2009 19:00 ဟိန်းဇော် .ရန်ကုန်မြို့ အေရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းရှိ ကွန်တိန်နာတလုံးတွင် အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းက အသေးစား ပေါက်ကွဲမှု တခု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမှာ ကော်စေ့များ စစ်ဆေးရာတွင် ဂက်စ်မီးခြစ် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ထို ဆိပ်ကမ်းရှိ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီများက ပြောသည်။
“လေ အလုံခန်းထဲမှာ ဂက်စ်နဲ့ သွားတွေ့တာ ဆိုတော့ ပေါက်ကွဲတာပေါ့။ ဒါ ဖြစ်တတ်တယ်လေ။ သူတို့ ဒီ ပေါက်ကွဲတာကို လူတွေ သိမှာ ကြောက်နေတယ်လေ” ဟု အေရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းမှ တာဝန်ရှိ သူတဦးက ပြောသည်။
အသေးစားပေါက်ကွဲမှုဟု ဆိုသော်လည်း ကွန်တိန်နာအတွင်း ဝင်ရောက် စစ်ဆေးသည့် အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတဦး နှင့် ပစ္စည်းထမ်းသော အလုပ်သမား တဦး ဒဏ်ရာရသွားကြသည်ဟု မျက်မြင် သက်သေ တဦးက ပြောသည်။
“အကောက်ခွန်က အရာရှိကတော့ လက် ထိသွားတယ်။ သူ့ကို ဆေးခန်း ချက်ချင်း ပို့လိုက်တယ်။ ကူလီသမားကတော့ ထိတာ များတယ်၊ သူ့ကိုတော့ ချက်ချင်း ဆေးခန်း မပို့ဖြစ်ဘူး” ဟု မျက်မြင် သက်သေ တဦးက ဆိုသည်။
အေးရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းသည် ရန်ကုန်တိုင်း၊ အလုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။
အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများကို အေးရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်း၊ အလုံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတို့က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိပေ။
စာနယ်ဇင်းသမားများက ဆက်သွယ်မေးမြန်းသည့်အခါ ယင်းသတင်း မဟုတ်မှန်ကြောင်းသာ ပြန်လည် ဖြေဆိုသည်ဟု ရန်ကုန်မှ သတင်းထောက် တဦးက ရှင်းပြသည်။
Thursday, 16 July 2009 19:02 ကိုစိုး .လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ အကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုလိုက်သော်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် မျှော်လင့်မထားကြောင်း ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။
သံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေက အကျဉ်းသားများလွှတ်မည်ဟု ပြောဆိုရာတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ထည့် သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးပါကလည်း ၎င်း၏ အစ်ကိုကဲ့သို့သော ခေါင်း ဆောင်ပိုင်းများကို စစ်အစိုးရက လွှတ်ပေးမည်ဟု မမျှော်လင့်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး၏ညီ ကိုအောင်ထွန်းက ပြောသည်။
“ကိုကိုကြီးတို့လို လူမျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ကတော့ လွတ်လာမှပဲ လွတ်လာပြီလို့ မျှော်လင့်ရမှာပဲ၊ ကိုကိုကြီးကတော့ အခု မိုင်းဆတ် ထောင်မှာ၊ သွားရေးလာရေးကလည်း ခက်ခဲတယ်၊ စရိတ်စက ကလည်း ကြီး တယ်”ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ် က ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ချမှတ်ခံရပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းဆတ်ထောင်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခံ ထားရသော ကိုကိုကြီး သည် နဂိုကပင် အသည်းရောဂါ၊ အစာအိမ် ရောဂါများရှိနေပြီး ကျန်းမာရေး မကောင်းသူ ဖြစ်သည်ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုပြုံးချို၏ ဖခင် ဦးဝင်းမောင်ကလည်း“အခု ပြောတာကို ကျနော်တို့က ဘယ်လို ယုံရမှာလဲ၊ သူတို့က ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ယုံရင်ကျနော်တို့ပဲ စိတ်ဆင်းရဲ မှာ”ဟု ပြောဆိုသည်။
ကိုပြုံးချိုသည်လည်း ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ချမှတ်ခံရပြီး တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်း အကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံထားရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္လာနေ့တွင် လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ ဦးသန်းဆွေက ယခုကဲ့သို့ အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် အစီ အစဉ်သည် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ တောင်းဆိုချက်အရဖြစ် ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် ယခုလဆန်း ၃ ရက် နှင့် ၄ ရက် ၂ ရက်ခရီးစဉ်အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက် ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ၂ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ တရားရင်ဆိုင် နေရသော မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပေ။
ကုလသမဂ္ဂက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးလွှတ်ပေးရန်နှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ပြုလုပ်ရန်တို့ကို စစ်အစိုးရအား တောင်းဆိုထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့မှ ဦးဆောင် သံဃာတော် တပါးဖြစ်သည့် အရှင်ဂမ္ဘီရ၏ မိခင်က ယခု အကျဉ်းသားလွှတ်ပေးရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အပြည့်အဝ မျှော်လင့်ချက်မထားကြောင်း ပြောဆိုသည်။
အရှင်ဂမ္ဘီရ၏ မိခင် ဒေါ်ရေး က“ဖြစ်လာရင်တော့ အင်မတန် မင်္ဂလာရှိတဲ့ အကြောင်းကိစ္စ တခုပေါ့၊ အန်အတီတို့ ကလည်း သိပ်ကို မျှော်လင့်နေတယ်လေ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ၆၈ နှစ် တွေ၊ ၆၅ နှစ် တွေ ၊ ၅၄ နှစ် တွေ ဆိုတဲ့ ထောင်ဒဏ် တွေဟာ မသင့်တော်တဲ့ ကိစ္စတွေပဲလေ၊ အရှင်ဂမ္ဘီရ တို့ကို ပြန်လွှတ်မယ်လို့တော့ သိပ်မထင်ဘူး၊ လွှတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဦးဆောင်မှု အပိုင်းက မဟုတ်တဲ့ လူမျိုးတွေတော့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အရှင်ဂမ္ဘီရ က တော့ အခု ကလေး ထောင်မှာပဲ”ဟု ပြောဆိုသည်။
အရှင် ဂမ္ဘီရကို စစ်အစိုးရက ထောင်ဒဏ် ၆၈ နှစ် ချမှတ်ထားရာမှ မကြာသေးခင်က အီလက်ထရွန်နစ် အမှု အတွက် ၅ နှစ် လျှော့လိုက်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း ခန္တီး ထောင်မှ မကွေးတိုင်း ကလေး ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အရှင်ဂမ္ဘီရ သက်တော်(၂၉) နှစ်သည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၇ ခု ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကြောင့် စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီး၍ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅ (ခ) ၊ လ၀က ပုဒ်မ ၁၃/၁ ၊ ပုဒ်မ ၁၇/၁ ၊ အီလက်ထရွန်နစ် ပုဒ်မ ၃၀၃(က)၊ အသင်းအဖွဲ့ပုဒ်မ ၆/၈၈ စသည်တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုပြီး ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခု နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် နေ့တွင် အရှင်ဂမ္ဘီရကို မန္တလေးတိုင်း စဉ့်ကိုင်မြို့၌ စစ်အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် ၏ မိခင် ဒေါ်တင်တင်ဝင်းကမူ ယခင် လွှတ်သူများတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ပါဝင်မှု နည်းပါးကြောင်း၊ ယခုလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကို ထည့်သွင်း ပြောဆိုခြင်း မရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အလေးအနက်ထားမှု မရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ခါတိုင်းလည်း ဒီလိုပဲ လွှတ်မယ် လွှတ်မယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးသမားက သိပ်မှမပါဘဲ၊ အခု သူတို့က ပြောတဲ့အထဲမှာ လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့ ထည့်မပြောတော့ သိပ်ပြီးတော့ မပြောရဲဘူးပေါ့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မရှိဘူး ဆိုတာကတော့ ဗြောင်လိမ်တာပေါ့၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဥစ္စာပေါ့၊ လူတိုင်းကသိနေတာပဲ ဘယ်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၊ ဘယ်ဟာ ရိုးရိုး အကျဉ်းသားဆိုတာ၊ အဲဒါကို မရှိပါဘူးလို့ပြောတာဟာ အဖြူကို အမည်းပေါ့၊ အဲဒီလို ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတာပေါ့၊ သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး၊ မှန်တာက နည်းတယ်မဟုတ်လား၊ သိပ်ပြီးတော့ လေးလေးနက်နက် ထားစရာ မလိုပါဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ၏ အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်များအတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား၂၁၀၀ ကျော် ရှိပြီးအများစုမှာ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရကြောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါတော်လှန်ရေး အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲ ခံရချိန်မှ စတင်၍ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား၂ ဆခန့် တိုးလာကြောင်း သိရသည်။
Thursday, 16 July 2009 19:30 ဧရာဝတီ .မနက်ဖြန် စတင်မည့် အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်အရေးသည် အရေးတကြီး ဆွေးနွေးရမည့် အကြောင်းအရာတခု ဖြစ်လာမည်ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရာရှိကြီးတဦးက ပြောသည်။
“သူဘာတွေပြောမယ် ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ ကျနော် ခန့်မှန်းလို့ မရဘူး။ သေချာတာကတော့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူပြောမယ်၊ ကျနော်တို့ စိုးရိမ်နေတာတွေကိုလည်း သူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပါလိမ့်မယ်” ဟု အဆိုပါ အရာရှိက ရှင်းပြသည်။
အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အများအပြားနှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်သော်လည်း စစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး နှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားခြင်း မရှိကြောင်း အရာရှိက ဆိုသည်။
“ဖြစ်နိုင်တာကတော့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေ ပါတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ တွေ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဘက် သီးသန့် တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်ထားတာတော့ မရှိပါဘူး” ဟု ထိုအရာရှိက ပြောသည်။
၄၂ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေး နှင့် ၁၆ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ဒေသတွင်း ဆွေးနွေးပွဲ တို့ကို ဇူလိုင် ၁၇ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖူးကက်မြို့တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် အစိုးရက မြန်မာပြည် ဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ပြန်လည် သုံးသပ်လျက်ရှိရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားစွဲဆိုမှု ပေါ်ပေါက်လာသဖြင့် မူဝါဒသုံးသပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်လျှော့ချထားသည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရာရှိက ပြောသည်။
“မူဝါဒ ပြန်သုံးသပ်မယ်လို့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကြေညာလိုက်ကတည်းက ပြန်လည် သုံးသပ်တာတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်သုံးသပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အရှိန် ကျသွားတယ်။ မူဝါဒ ပြန်သုံးသပ်တဲ့ နေရာမှာ ဒီ တရားစွဲဆိုမှုကိုလည်း သေချာပေါက် ထည့်ပြီး စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အရှေ့တောင်အာရှ နှင့် ပစိဖိတ် ဒေသ ဆိုင်ရာ အရာရှိ မစ္စတာ စကော့မာရှယ်က ပြောသည်။
စကော့မာရှယ်က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မထွက်ခွာမီ သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံ ရည်မှန်းချက်များ၊ သဘောထားများမှာ ယခင်အတိုင်းပင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“မူဝါဒ ပြန်သုံးသပ်တာတွေ အဆုံး မသတ်သေးဘူး ဆိုတာက ကျနော်တို့မှာ သံတမန်ရေး ဆိုင်ရာ နည်းနာတွေ၊ မူဝါဒတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြေခံ မူဝါဒတွေက အရင်အတိုင်းပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ဖို့ တွန်းအားပေးဖို့ အတွက် လုပ်နိုင်တာတွေကို လုပ်သွားမှာပါ” ဟု စကော့မာရှယ်က ပြောသည်။
“အပြောင်းအလဲတွေ ဆိုတာ အာဏာပိုင်တွေ၊ အတိုက်အခံ နဲ့ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေ အကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြဖို့၊ အကျဉ်းသားတွေ လွတ်လာဖို့ ပြီးတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ပေါ်လာဖို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ နိုင်ငံတကာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံဖို့လည်း ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
“ဒီလိုရည်မှန်းချက်တွေ ဖြစ်ထွန်းဖို့ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာအတွက် မူဝါဒ ပြန်သုံးသပ်နေတာပါ။ အခြေခံ သဘောတရားတွေက မပြောင်းသေးပါဘူး။ ပြန်သုံးသပ်တယ်ဆိုတာ အသေးစိတ် အချက်တွေ ဒါမှမဟုတ် ကျနော်တို့ ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို ဆန်းစစ်တာပါပဲ။ မူဝါဒ ပြန်သုံးသပ်တာတွေ အဆုံးမသတ်သေးဘူးဆိုတာက ကျနော်တို့မှာ ဘာမှ မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု စကော့မာရှယ်က ပြောသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်းမှ အသင်းဝင် နိုင်ငံများအပါအဝင် အသင်း၏ ဆွေးနွေးဖက် နိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ သြစတေးလျ၊ နယူးဇီလန် နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့က အစည်းအဝေး တက်ရောက်မည်ဟု အတည်ပြုထားကြသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၂၆ နိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း ၁၂ဝဝ ထက်မနည်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံဒေသနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးပွဲပေါင်း ၃၂ ခု ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
အာဆီယံ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲ မြန်မာ့အရေး လွှမ်းမိုးဖွယ်ရှိ
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်ထော (John Yettaw) ရဲ့ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်မှုကြောင့် အကျယ်ချုပ်ကျခံစဉ် တားမြစ်မိန့် ချိုးဖောက်မှုနဲ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်း ဖမ်းဆီးခံရပြီး ရုံးတင်စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုအခြေအနေကြောင့် အဓိကဖြစ်တယ်လို့ အခုလို သူက ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
“ဒီကိစ္စ နှေးနေရတာကတော့ ကျနော်တွက်ကြည့်တာက နောက်ထပ် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေတွေအရ အထူးသဖြင့်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းဆီးပြီး အရေးယူ တရားခွင်တင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တာမို့ပါ။ ဒါတွေက ကျနော်တို့ မူဝါဒရေးရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေ အပေါ်မှာ သေချာပေါက် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။”
ဒါ့အပြင် အခုလို ပေါ်လစီ ထွက်ပေါ်မလာပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ အခြေခံ ရပ်တည်ချက်ဟာ မပြောင်းလဲဘူးလို့လည်း မစ္စတာ မာဆီယယ်လ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးတက်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာစေဖို့ တိုက်တွန်းဖို့ ကျနော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံကျတဲ့ မူဝါဒရေးရာတွေကတော့ နဂိုအတိုင်းပဲ ရှိနေဆဲပါ။ တိုးတက်မှုတွေ အဖြစ်နဲ့ကတော့ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံတွေ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ ဆွေးနွေးပြောဆိုကြဖို့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ တိုးတက်မှု ရှိလာစေဖို့တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ပိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိဖို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။”
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်အနေနဲ့ကတော့ သူ ရာထူးလက်ခံအပြီး အာရှကိုသွားရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိစဉ် မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်က ချမှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ အလုပ်မဖြစ်ဘူး၊ တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာအစိုးရအပေါ် သင့်သင့်မြတ်မြတ် ဆက်ဆံပြီး နားချပြောဆိုတဲ့ နည်းဟာလည်း မထိရောက်တဲ့အကြောင်း ၀န်ခံပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Smart Power ဆိုတဲ့ ဇ၀နဉာဏ်သုံးပြီး အလျှော့အတင်းပြုလုပ် ဆက်ဆံသွားဖို့ ပေါ်လစီကို သုံးသပ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ကြီး ကလင်တန်အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိစဉ် ဖူးခက်မှာကျင်းပမယ့် အာဆီယံ အသင်းကြီးရဲ့ ၀န်ကြီးများအဆင့် ညီလာခံကိုလည်း နောက်သီတင်းပတ် တက်ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အမေရိကန်ရဲ့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မှုများကို ၀န်ကြီးကလင်တန်အနေနဲ့ အတိအကျ ပြောဆိုဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း မစ္စတာမာဆီယယ်လ်က အခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုး ကျနော်တို့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေရတာတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောတာမျိုးတွေ သူလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ ကျနော် ယုံကြည်ထားပါတယ်။”
“ဒါကြောင့် အမေရိကန် ပေါ်လစီသုံးသပ်မှု မပြီးမချင်း၊ အမေရိကန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တိကျပြတ်သားတဲ့ ပေါ်လစီ မရှိမချင်း ကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ၊ တုံ့ပြန်မှုတွေကတော့ နှေးကွေးနေဦးမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က အမေရိကန်အစိုးရကို သူ့ရဲ့ Policy Review ကို အမြန်ဆုံး အဆုံးသတ်ဖို့၊ ပြီးတော့ တိကျပြတ်သားတဲ့ ပေါ်လစီတရပ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး လှုပ်ရှားဖို့ ကျနော်တို့က တိုက်တွန်းနေကြတာပါ။
“ဒါပေမယ့် တဖက်မှာကြတော့ သူတို့ကလည်း Policy Review မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုကိစ္စကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ အခါကြတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးမှသာလျှင် Policy Review က အဆုံးသတ်မယ့် လက္ခဏာ ရှိနေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကလည်း မမျှော်လင့်ဘဲ အချိန်ကြန့်ကြာနေတဲ့ အခါကြတော့ တဖက်မှာ အမေရိကန် Policy Review ကလည်း လိုက်ပြီး ကြန့်ကြာနေတဲ့ သဘောပါပဲ။”
အီရန် နျူကလီးယား အေဂျင်စီ အကြီးအကဲ နုတ်ထွက်
အီရန်နိုင်ငံ အဏုမြူစွမ်းအင်အဖွဲ့ (IAEO) ရဲ့ အကြီးအကဲ ဂိုလမ်းရီဇာ အက်ကာဇာဒေး (Gholamreza Aqazadeh) ဟာ အကြောင်းပြချက် တစုံတရာ မပြောဆိုဘဲ ကြာသပတေးနေ့မှာ ရာထူးက နုတ်ထွက်သွားတယ်လို့ အီရန်သတင်းဌာန အစ္စနာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သူဟာ ဒု-သမ္မတရာထူးကိုလည်း ပူးတွဲယူထားသူ ဖြစ်တာမို့ သမ္မတ မာမွတ်ဒ် အမာဒီနီဂျက်ဒ် (Mahmoud Ahmadinejad) ရဲ့ ဒု-သမ္မတရာထူးကနေလည်း နုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နုတ်ထွက်စာကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးပတ်လောက်ကတည်းက တင်ထားတာဖြစ်ပြီး သမ္မတ အမာဒီနီဂျက်ဒ်ကလည်း အဲဒီနုတ်ထွက်လွှာကို လက်ခံခဲ့တယ်လို့ မစ္စတာ အက်ကာဇာဒေးရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး အီရန် အစ္စနာသတင်းမှာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့သူ မီယာ ဟူစိန် မူဆာဗီ (Mirhossein Mousavi) နဲ့ ဆက်နွယ် ပတ်သက်နေသူတဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်အစိုးရရဲ့ နျူကလီးယား လုပ်ဆောင်မှုတွေကို မစ္စတာ အက်ကာဇာဒေးက ဦးစီးဆောင်ရွက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက အီရန်နိုင်ငံ နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာမှာကို စိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပြီး အီရန်ကတော့ သူတို့ဟာ အရပ်သားတွေအတွက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အသုံးပြုမှုတွေ လုပ်ဖို့ပဲ ရည်ရွယ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ သြစတြေးလျနိုင်ငံက ၀က်တုပ်ကွေး ကူးစက်သူ ၆,၀၀၀ အထိ သေဆုံးနိုင်
A H1N1 ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုးအတွက် ကာကွယ်ဆေးတွေ၊ ဆက်လက်မပြန့်ပွားအောင် ဟန့်တားနိုင်တဲ့ဆေးတွေ မတီထွင်နိုင်ဘူးဆိုရင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသား ၆,၀၀၀ လောက် သေဆုံးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ရှိနေတယ်လို့ သြစတြေးလျ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက သတိပေးထားပါတယ်။
သြစတြေးလျ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး နစ်ကိုလာ ရော့က်စ်ဆန် (Nicola Roxon) က ဒီကနေ့ အေဘီစီ သြစတြေးလျ သတင်းဌာနနဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါကို အဆိုးရွားဆုံး ရောဂါလက္ခဏာ အခြေအနေအဖြစ် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သြစတြေးလျ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီလို အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေကို မရောက်အောင် အောက်တိုဘာလကစပြီး ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် စီမံဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသက သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး ရောဂါကူးစက်သူ ၁၁,၀၀၀ ကျော်မှာ သေဆုံးသူ ၂၂ ဦး ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ နောက်ထပ်တယောက် တွေ့ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာအစိုးရ သတင်းဌာနမှာ ဖော်ပြထားပြီး သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်လာတဲ့ အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ သူဟာ တတိယမြောက် ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ါရှင်တန်ဒီစီက နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကောင်စီမှာ ပြောသွားတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းမှာ ပြောသွားတာဖြစ်ပြီး၊ အီရန်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်စရာ လုပ်ရမယ့်အချိန်ဟာ အခု ကျရောက်နေပြီလို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အီရန်ရွေးကောက်ပွဲကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ အတော့်ကို တလေးတစား စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အပေါ် မကျေနပ်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုအပေါ် အီရန်အစိုးရက အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းတာကြောင့် စိတ်ပျက် တုန်လှုပ်ရတယ်လို့ မစ္စစ် ကလင်တန်က ပြောပါတယ်။ အီရန်အစိုးရဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ သတင်းထောက်တွေကို နှင်ထုတ်တာတွေနဲ့ နည်းပညာအသုံးပြုမှု ဖြတ်တောက်တာတွေ လုပ်ခဲ့တာကို ဖုံးကွယ်ဖို့လည်း ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအပြုအမှုတွေဟာ ဆိုးဝါးပြီး လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်တွေကြောင့် နိုင်ငံတကာက အီရန်အပေါ် ထားတဲ့ အမြင်တွေလည်း ပြောင်းသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရင်ကာလတုန်းက အီရန်နဲ့ စကားပြောဖို့ အမေရိကန်ဖက်က ငြင်းပယ်ခဲ့တာကိုလည်း ဝေဖန်သွားပါတယ်။ အီရန် နျူကလီးယား လက်နက်အစီအစဉ် တားဆီးရေး၊ အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကို ထောက်ပံ့နေတာတွေ တားဆီးရေးနဲ့ အီရန် ပြည်သူတွေအပေါ် အစိုးရရဲ့ ဆက်ဆံမှု ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက် အမေရိကန်ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာ ဒီနည်းဟောင်းကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်က သုံးသပ်ပါတယ်။ အီရန်အနေနဲ့ သူ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတာနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို ထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေ ရပ်မယ်ဆိုရင် အီရန်ဟာ ဒေသတွင်း အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးကလင်တန်က ပြောသွားပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံက နာမည်ကြီး လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ အမျိုးသမီး နတ်တလျှာ အက်စတီ မီရိုဘာ ဟာ ချေချင်းညာ ဒေသမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ သူသေဆုံးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ရုရှား အာဏာပိုင်တွေဘက်က ပြောပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခေါင်းနဲ့ ရင်ဘက်မှာ သေနတ်နဲ့ အပစ်ခံထားရတာကိုတွေ့ရပြီး၊ သူ့ရဲ့ အလောင်းဟာလည်း ကော့ကေးရှပ်စ် မြောက်ပိုင်း ချေချင်းညာ နယ်ခြားမှာ တွေ့ခဲ့ရတာပါ။
အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုရှားသမ္မတ ဒင်မစ်တြီ မက်ဗီယဲဒဖ်က က တော်တော်လေးကို ဒေါသထွက်နေပြီး အဆင့်အမြင့်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ သမ္မတရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုပါတယ်။ အီးယူ သမဂ္ဂကလည်း အခုကိစ္စကို ဆန့်ကျင် ရှုတ်ချပြီး ဒါဟာ တော်တော်ရက်စက်တဲ့ အပြုအမူပဲလို့ ပြောပါတယ်။ Human Rights Watch လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်မှု အဖွဲ့ကလည်း အခုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှုတ်ချအပြစ်တင် လိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း ၅ ကြိမ်အထိ ပစ်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်လွန်းပျံယာဉ် အန်ဒါဗာ (Endeavour) ကို အခု နိုင်ငံတကာ အာကာသ စခန်းဆီကို အောင်အောင်မြင်မြင် လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ အမေရိကန် အာကာသ အေဂျင်စီ NASA က ဆိုပါတယ်။
ဒီ လွန်းပျံယာဉ်ကို အမေရိကန် အရှေ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ် Florida မှာရှိတဲ့ Kennedy အာကာသစင်တာ ကနေ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က လွှတ်တင်ခဲ့တာပါ။ ဒီလွန်းပျံယာဉ်ထဲမှာ အာကာသမှူး ၇ ယောက် လိုက်ပါသွားခဲ့ပြီး ဂျပန်လို Kibo၊ ဒါမှမဟုတ် “မျှော်လင့်ချက်” လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဂျပန် သိပ္ပံဓါတ်ခွဲခန်း တခုမှာ နောက်ထပ် အစိတ်အပိုင်းတခု ထပ်ပြီး တပ်ဆင်ဖို့ အတွက် အာကာသစခန်းဆီ သူတို့ ထွက်ခွာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ အာကာသပေါ်မှာ သီတင်း ၂ ပတ်ကျော် လမ်းလျှောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်ရမယ့် တာဝန်တွေထဲမှာ တခု ကတော့ အာကာသ လဟာပြင်နဲ့ ထိတွေ့ဖို့လိုတဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ဖို့အတွက် ကီဘို ဓာတ်ခွဲခန်း အပြင်ဘက်မှာ ပလက်ဖောင်း တခု လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘန်ကီမွန်း မြန်မာ့အရေး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖုိ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစု တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရအောင် ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ မကြာသေးခင်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အပေါ်မှာ အားမလိုအားမရ ဖြစ်တာတွေ၊ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ နိုင်ငံရေး ကိစ္စတွေ အတွက် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆီကို စာတွေ ရေးသားပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီကြီး တခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီနဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက တိုက်တွန်းစာတွေ ရေးသား ပေးပို့ခဲ့ကြတာပါ။ အကြောင်းစုံကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း အကျေအလည် ဆွေးနွေးမှုတွေ မလုပ်နိုင်ခဲ့တာ၊ နောက် သူ ရည်ရွယ်ထားသလို တွေ့ဆုံလိုသူတွေနဲ့ မတွေ့နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတာမို့ မြန်မာ့အရေး ဒီထက်ပို လုပ်ဖို့ လိုနေပြီ ဆိုပြီး အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀န်းက စာတွေ ရေးသား ပေးပို့ခဲ့ကြတာပါ။ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ၂ ရက်ကြာ ခရီးစဉ် အဖြစ် ဒီလဆန်းပိုင်း သွားရောက်တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့၊ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံကြား ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့နဲ့၊ ရှေ့နှစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ တွေဟာ နိုင်ငံတကာက ယုံကြည်လက်ခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်ဖို့ စတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးဖို့ ရည်ရွယ် ထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီကြီး တခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံတာတွေ ရှိခဲ့တဲ့ နေရာမှာ မိနစ် ပိုင်းလောက်သာ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တိုတောင်းတဲ့ အချိန်အတွင်း နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို အကြေအလည် မဆွေးနွေးနိုင်တာမို့ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီကလည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆီကို စာရေး ပြောဆိုရတာလို့ ပါတီအတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင် က ပြောပါတယ်။
“အန်အယ်လ်ဒီက ရေးတာကတော့ အထွေထွေ အခြေအနေတွေပဲဗျ။ အထွေထွေ အခြေအနေဆိုတာက အခြေခံဥပဒေ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတို့ပဲ။ ရေးဖို့ဆိုတာကို ကျွန်တော် သဘောတူလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် မပြောလိုက်ရဘူး။ ဘန်ကီမွန်းတို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း တိုက်တွန်းသွားတာကိုး။ တိုက်တွန်းသွားတာက စာနဲ့ရေးပြီး ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက် စာရေးတာပဲဗျ။ ရေးတာဆိုတာကို ရေးဖို့ သဘောတူတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က အထွေထွေ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေ ကို အခြေခံရေးမယ်။ အဲဒါပဲဗျ။ ”
ဒီလိုပဲ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆီကို တိုက်တွန်းစာရေးသား ပေးပို့ပြီး နိုင်ငံရေး အမြင်သဘောထားတွေကို ပြောဆိုဖို့ ရှိနေတာ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး အင်အားစုတခုဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ (CRPP) ပါ။ စစ်အစိုးရက ကမကထလုပ် ကျင်းပဖို့ ရှိနေတဲ့ ရှေ့နှစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွေကို အာရုံစိုက် ပြောဆိုနေတာဟာ အခြေခံနိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို ပြေလည်စေရေး ဦးမတည်နိုင်တဲ့အကြောင်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို ပြောဆိုဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ CRPP အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအေးသာအောင် ကတော့
“အခုလို နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့ ဆိုရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စကို ဇောင်းပေးပြီး ပြောနေမယ့်အစား ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးကို အန်ကယ်တို့က အဓိကထားပြီး ပြောနေမယ်။ အခု ဖြစ်နေတာက ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ အလေးပေး ပြောနေတဲ့အပေါ် ပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ အပါအင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပါတီကို အဓိက ပြောချင်တာက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဖို့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒါကိုမပြင်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ တခုတည်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး ပြဿနာ ကို ဖြေရှင်းဖို့ အဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အဓိကထား ပြောချင်တာပါ။”
တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအေးသာအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ပြည်ပမှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB)၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ကောင်စီ (NCUB)၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး များကောင်စီ (ENC)၊ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) စတာတွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း (၇) ဖွဲ့ကလည်း ပူးပေါင်းပြီး အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင် ဒီကနေ့ပဲ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆီကို ရေးသား ပေးပို့လိုက်ကြတာပါ။ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ တွေ ကြီးထွားမလာအောင် ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက ဒီထက်ပို ဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ အနေနဲ့ အခုလို စာရေးသား ပေးပို့လိုက်ရတာလို့ NCUB နိုင်ငံခြားရေးရာ တာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ ဦးညိုအုန်းမြင့် က ဆိုပါတယ်။
“ဘန်ကီမွန်းရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ဘန်ကီမွန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မတွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြင် အနာဂတ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရော၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရော ကျွန်တော်တို့ အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်ရဲ့ ပြဿနာကို တရားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အနည်းဆုံး ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအပေါ်မှာ နအဖအနေနဲ့ အခွင့်ကောင်းယူလာမှာကို စိုးရိမ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ မဖြစ်ချင်တဲ့အတွက် အတက်နိုင်ဆုံး ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ထောက်ခံထားတဲ့သူတွေရော၊ နအဖကို ထောက်ခံထားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”
အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကတော့ တနင်္လာနေ့တုန်းကပဲ သူ့ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အစီရင်ခံ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အစီရင်ခံအပြီး သတင်းထောက်တွေကို ပြောတဲ့နေရာမှာလည်း မစ္စတာဘန်ကီမွန်း က သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ဆွေးနွေးထားသလို တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်တာကို မြင်တွေ့လိုတဲ့ အကြောင်း ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိ အခြေအနေတွေမှာ၊ မြန်မာပြည်သူတွေ မျှော်လင့်နေတာတွေ လိုအပ်နေတာ တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လျစ်လျူရှုမလား၊ တိုင်းပြည်အကျိုး ရှေ့ရှုပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက် သွားမလား ဆိုတာတွေကိုတော့ ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း စစ်အစိုးရအပေါ် အတွင်းရေးမှူးချုပ်က သတိပေး ပြောဆိုသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်လေယာဉ်ပျက်ကျ ခရီးသည်အားလုံး သေဆုံး
တဟီရန် မြို့တော်ကနေ အာမေးနီးယန်းနိုင်ငံမြို့တော် ရရေဗန်(Yerevan)ကို ပျံသန်းလာတဲ့ အီရန်-ရုရှား ဖက်စပ် လေကြောင်းလိုင်း ကက်စ်ပီရန် လေကြောင်းခရီးစဉ်အမှတ် ၇၉၀၈ရဲ့ ရုရှားလုပ် TU 154M တူပိုလပ် ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကြီးဟာ အီရန် အနောက်မြောက်ပိုင်း ကွက်စ်ဗေးမြို့အနီးမှာ ၂ပိုင်းကျိုးကျပြီး ပျက်ကျသွားပါတယ်။ လိုက်ပါလာတဲ့ ခရီးသည် ၁၅၃ယောက်နဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်း ၁၅ယောက်တို့ သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ အီရန် ရုပ်မြင်သံကြားဌာနက ကြေညာပါတယ်။
ဒီလေယာဉ်ဟာ တဟီရန်မြို့တော်ကနေ ၇၅မိုင်အကွာ ကွက်စ်ဗေးမြို့နားက ဂျနာတာပ ရွာအနီးမှာ ပျက်ကျခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တဟီရန် မြို့တော် အီမန်ခိုမီနီ လေဆိပ်ကနေ ပျံတက်လာပြီး ၁၆မိနစ်အကြာမှာ ပျက်ကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့ အီရန် လေကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရီဆာဂျဖာဇာထဲ က အီရန်ရဲ့ ပရက်စ် တီဗွီ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကက်စ်ပီရန်လေကြောင်းလိုင်းဟာ ၁၉၉၀ခုနှစ်တွေက အီရန်နဲ့ ရုရှား ဖက်စပ် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေးမတတ်နိုင်သဖြင့် ကျောင်းသားထက်ဝက်ခန့် ကျောင်းမတက်နိုင်
Thursday, 16 July 2009 14:14 ဉာဏ်မောင် .ငွေကြေးမပြေလည်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များပြားမှုကြောင့် တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသားထက်ဝက်ခန့် ကျောင်းတက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့သည့် အခြေအနေ ကြုံတွေ့နေရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ အရှေ့ပိုင်း၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်တွင် ယခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက် ကျောင်းတက်ချိန်တွင် တက္ကသိုလ်တခုလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ထက်ဝက်နီးပါး ကျောင်းမတက်နိုင်တော့ကြောင်း တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
"အခုကျောင်းသားတွေ စာမေးပွဲနီးမှ ကျူရှင်ပဲ တက်ကြတယ်၊ အဆောင်ကြေးရော၊ အခြားစရိတ်တွေရောဆို တသိန်းလောက်ကျတော့ မတက်နိုင်ကြဘူး၊ တချို့အဆောင်ဆို ပိတ်လိုက်ရတာတွေတောင်ရှိတယ်" ဟု ပြောသည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် စာမေးပွဲဖြေရန် တလအလိုလောက်တွင် အတန်းပိုင်းဆရာမများထံ ကျူရှင်တက်ပြီး မေးခွန်းထုတ် ဖြေဆိုကာ ပြန်သွားခြင်းများ လုပ်နေသည်ဟု ဆက်ပြောသည်။
"ဖြေခါနီးမှာ ကျောင်းက ဆရာမတွေက တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကျူရှင်ပေးလိုက်တာကိုပဲ တက်လိုက်ကြတာ၊ တဘာသာကို ၆,၀၀၀၊ ၇,၀၀၀ ပေးရတယ်၊ သုံးပတ်၊ တလလောက်တက်ရတာ၊ ပြီးရင်း မေးခွန်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်၊ အဆောင်မှာ လာနေ၊ အဲလိုတက်ပြီးစာမေးပွဲဖြေပြီး တခါတည်းပြန်ကြတာ၊ ကျောင်းတက်တယ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး" ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ယခင်က ကျောင်းသား ၂၀ ရှိသော အဆောင်တွင် ယခုအခါ ကျောင်းသား ၃ ဦးလောက်သာရှိပြီး တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်အနီးတွင် အဆောင် ၅၀ ရှိကာ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသည့် အဆောင်များလည်း ရှိသည်။
"တချို့က အိမ်မှာ လေးငါးယောက် ထားတာရှိတယ်၊ အဆောင်ကြီးတွေ လေးငါးဆယ်ထားတဲ့ အဆောင်တွေမှာလ ၁၅ ယောက်၊ အယောက် ၂၀ လောက်ပဲ ရှိတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှ ကျောင်းတက်တာရှိသေးတယ်၊ အခု တော်တော်ကို လျော့သွားတာ" ဟု ပြောသည်။
ယခုနှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက် ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာ ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်ကာ မတ်လ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ပိတ်လိုက်ပြီး ဒုတိယနှစ်ဝက် ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကို ဇွန် ၂ ရက်နေ့က စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"ဒုတိယနှစ်ဝက်ပြန်ဖွင့်တာက ဇွန် ၂ ရက်နေ့က၊ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားက သုံးပတ်လောက်နေမှ စုံတာ၊ အဲဒီစုံတယ်ဆိုတာတောင် တဝက်လောက် လျော့ကြသွားပြီ၊ အဓိကကတော့ ကုန်ကျစရိတ်က အစစအရာရာ ကြီးလာတော့ စီးပွားရေးလဲ မပြေလည်လို့ အခုလိုဖြစ်တာ" ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။
မုန်တိုင်းကြောင့် နေအိမ်များပျက်စီးပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရရသူမျာ ဆေးရုံပို့ထား
Wednesday, 15 July 2009 00:00 ရိုးမ ၃ .ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်တွင် ယမန်နေ့က တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် လေဆင်နှာမောင်းကြောင့် လူနေအိမ်များ ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို ဆေးရုံပို့ထားရသည်။
ကြိမ်ချောင်းကြီးကျေးရွာတွင် ယမန်နေ့ ညနေ (၃) နာရီခန့်က တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် မုန်တိုင်းကြောင့် လူနေအိမ် ၃၀ ကျော်ပျက်စီးသွားပြီး လူ ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိသဖြင့် မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားရသည်။
"လူနေအိမ် သုံးဆယ်ကျော်လောက် အကုန်နီးပါး ပျက်စီးသွားတယ်၊ ဒဏ်ရရတဲ့သူတွေကိုတော့ ည (၁၀) နာရီလောက်မှာ ကြက်ခြေနီတွေ ရောက်လာပြီး ဒီမနက် ဘိုကလေးဆေးရုံကို သယ်သွားတယ်၊ တယောက်ကတော့ အခြေအနေတော်တော်ဆိုးတယ်၊ သစ်ချောင်းနဲ့ ရိုက်မိတာ" ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် မုန်းတိုင်းကြောင့် စက်လှေနှစ်စီး ပျက်စီးသွားပြီး နောက်ထပ် စက်လှေနစ်မြုပ်မှုများ ရှိနိုင်သေးကြောင်း ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
"စက်လှေတွေပျက်တာရှိတယ်၊ အခုသိရတာတင် နှစ်စီးရှိတယ်၊ နောက်ထပ်လဲ ပျက်စီးတာတွေ ရှိနိုင်သေးတယ်၊ လောလောဆယ်တော့ မရယဥက္ကဌက ကြိမ်ချောင်းကြီးရွာကို ရောက်တယ်၊ အဲဒီမှာ တချို့အိမ်တွေက ဆောက်လက်စတွေ၊ လူမနေရသေးတာတွေလဲရှိတယ်" ဟု ဒေသခံက ပြောသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကြိမ်ချောင်းကြီးရွာတွင် ထူးဆောက်လုပ်ရေးက တာဝန်ယူကာ လူနေအိမ် အလုံး ၁၂၀ ဆောက်လုပ်ပြီး နောက်ထပ် အလုံး ၁၀၀)ဆောက်လုပ်နေလျှက်ရှိသည်။ အဆိုပါကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ စုစုပေါင်း ၄၂၀ ဆောက်လုပ်ထားပြီး ယခုလက်ရှိ အလုံး ၂၀၀ မှာ ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။
ယခု ပျက်စီးသွားသည့် အိမ်များမှာ ထူးဆောက်လုပ်ရေးမှ ဆောက်လုပ်ထားသည့် နေအိမ်များပါဝင်ပြီး အချို့မှာ လူမနေသေးသည့် နေအိမ်များရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု နည်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံက ဆက်ပြောသည်။
ယမန်နေ့က တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် မုန်တိုင်းကြောင့် အခြား ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးမှ ကျေးရွာများတွင်လည်း ထိခိုက်မှုများရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေလ (၂) ရက်နေ့ညတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်းတိုင်းကြောင့် ဘိုကလေးမြို့နယ်တခုလုံးနီးပါး ပျက်စီးခဲ့ပြီး ကြိမ်ချောင်းကြီးကျေးရွာတွင် လူပေါင်းမြောက်များစွာ သေဆုံးခဲ့ကာ တရွားလုံး ပျက်စီးခဲ့သည်။
ယခုထပ်မံတိုက်ခတ်သည့် လေဆင်နှာမောင်းကြောင့်လည်း လူနေအိမ်များပျက်စီးကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကြောင့် ဒေသခံများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများ ဖြစ်နေရသည်။
ဗြိတိန်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ပူးပေါင်း ပါဝင်ရန် ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျကို တိုက်တွန်း
မောင်ရမ္မာ (နိရဉ္စရာ) မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အတူ ပူးပေါင်း ပါဝင်သင့်ကြောင်း ဗြိတိန်က တိုက်တွန်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
အဆိုပါ တိုက်တွန်းမူကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှ ကော်မရှင်နာ မင်းကြီး စတီဖင် အီဗင့်က သူ၏ ကော်မရှင် သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြို့တော် ဒက္ကားရှိ သတင်းထောက်များစည်းရုံးရေးအသင်း ခန်းမဆောင် တွင် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစား ထောက်ခံတဲ့ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ဗြိတိသျှ ကော်မရှင်နာက ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားခြင်းအပေါ် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက မတော်မတရားသည့် လုပ်ရပ်အဖြစ် ရှု့မြင်ကြပြီး သူမ၏ ကိုယ်ပိုင် လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာ လှုပ်ရှားခွင့် ရရှိရေး အတွက် အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ အနေဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင် တောင်းဆိုသင့်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
၄င်းပြင် သူက “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဗြိတိန် အပါအ၀င် ဥရောပ၊ အမေရိက နဲ့ တခြား တိုင်းပြည်တွေက တောင်းဆို နေတာ ထက် ခင်ဗျားတို့လို အိမ်နီးချင်း တိုင်းပြည်တွေကသာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆို မယ်ဆိုရင် ထူးခြားမှု တစုံတရာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်” ဟု သူကဆိုသည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည် ကြားနေရေး နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒကို လက်ခံကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အတွက် တောင်းဆိုချက်များ ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထဲရေးကို ၀င်ရောက် စွက်ဖက်သလို ဖြစ်မနေဘူးလားဟု သတင်းထောက်များက မေးသောအခါ သူက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားဖို့ တောင်းဆိုတာဟာ ကြားဝင် စွက်ဖက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။” ဟု ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံစလုံးသည် ကုလ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများဖြစ်ကြသဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောကြားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြှောက်ရေးကို ကမ္ဘာ ထူထုက လိုလားသလို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လူထုကလည်း လိုလားသဖြင့် ဒေါ်စု လွတ်မြှောက်ရေးအတွက် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ အနေဖြင့် တခြားနိုင်ငံများနှင့် အတူ လက်တွဲ တောင်းဆို ရာတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင် သင့်ကြောင်း သူက အလေးအနက်ထား ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
ဆင်းရဲ ကျပ်တည်းမူကြောင့် စစ်တွေတွင် လုယက်မူများ အထူးတိုးပွားလာ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့တော် စစ်တွေတွင် ဆင်းရဲကျပ်တည်းမူကြောင့် လုယက်မူများ အထူးတိုးပွားလာနေသည်ဟု အမည် မဖေါ်လိုသူ အမျိုးသမီး တဦးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
သူမက "အခု လုယက်မူတွေ အထူးတိုးပွားလာနေတဲ့ အတွက် အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ရွှေကြိုးတွေကို ၀တ်ပီး သွားလာတာကို ရှောင်ရှားလာရပါတယ်။ လမ်းဆုံ လမ်းခွတိုင်းမှာ လုယက်မူတွေ မကြာခဏ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တခါမှ ဖမ်းမိတယ်ဆိုတာ မကြာရပါဘူး" ဟု ပြောသည်။
စစ်တွေတွင် လူအတော်များများမှာ စီးပွားရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်နေပြီး အများစုမှာ အလုပ် လက်မဲ့ ဖြစ်နေကြသည်ဟု သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသဖြင့် စစ်တွေတွင် ခိုးဆိုး လုယက်မူများ တိုးပွားလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သူမက ပြောသည်။
"စစ်တွေမှာ ဘယ်သူကမှ စီးပွားရေး အဆင်မပြေဘူး။ လက်လုပ် လက်စား ဆင်းရဲသား တွေဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ အခုစားမယ့်ဟာ အခုရှာမရ ဖြစ်နေတော့ ဆိုက်ကားနှင်းတဲ့ သူတွေသာ တနေ့ထက် တနေ့ ပိုများလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုက်ကား အရေအတွက်ကလည်း စီးတဲ့လူထက် စစ်တွေမှာ များနေလေတော့ လူတွေလည်း ခုလို လုယက်မူတွေကို ကျူးလွန်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ယခင်က ခိုးဆိုး လုယက်မူများ မရှိသလောက် ဖြစ်ခဲ့သော စစ်တွေတွင် လုယက်မူများ အဆမတန် များပြားလာသဖြင့် ညဉ့်အချိန်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ လက်ဝတ် လက်စားများနှင့် အပြင်သို့ မထွက်ရဲဘဲ ဖြစ်လာကြသည်ဟု သူမက ပြောဆိုသွားသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ညနေက ကားထိုးရပ်ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရုံးတ၀ိုက်၊ ၃၇လမ်း အလယ်နဲ့ အောက်ဘလောက်၊ ၃၈လမ်းက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေကြတဲ့ ပတ်စ်ပို့တ် (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်) ပွဲစားတွေကို အကုန်ဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ ဘာအတွက်ဆိုတာ မပြောဘူး၊ ဖမ်းဖို့လာတဲ့သူ တွေဆီမှာ သူတို့တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပါလာတယ်။ အဲဒါနဲ့ တိုက်ကြည့်ပြီး ဟုတ်တယ်ဆိုရင် ဖမ်းခေါ်သွားတယ်၊ နောက်ရက်မှာ ကြားရတာကတော့ ရုရှားလူမျိုး ၃ ယောက်ကို နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လုပ်ပေးတဲ့ဆီက ပြဿနာစတာလို့ ပြောသံကြားတယ်”
“ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီလို ရုရှား လူမျိုးကို စာအုပ်လုပ်ပေးတာလည်း ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်တဲ့အခါ သန်းကောင်စာရင်းတို့ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူတို့မှာ စစ်ဆေးပြီးကြောင်း ရိုက်နှိပ်တဲ့ တံဆိပ်တုံး (ချက်တုံး) အတုလုပ်တဲ့ ပြဿနာလည်း ပါတယ်လို့ ကြားတယ်၊ အဲဒီ တံဆိပ်တုံးအတုနဲ့ လျှောက်လွှာတွေကို အဆင့်ဆင့်တင်ရာမှာ အပေါ်ဆင့်တွေကလည်း တော်တော်နဲ့ မသိကြဘူးလို့ဆိုတယ်၊ အဆင့်ဆင့် ရေလောင်း (ငွေပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်) သွားတာကြောင့်လည်း မသိကြတာထင်တယ်”
(Photo - 2004,6storied, Passport Office run by Burmese Special Branch in PansoeDanLan, Rangoon, Burma, file photo)
ရဲဖက်ထောက်လှမ်းရေးများ ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် အပိတ်ခံထားရ
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၂၀၀၁ ကတည်းက မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ကို စစ်အုပ်စုက ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေသာ အထူးခွင့်ပြုချက်နဲ့ စီးနင်းခွင့် ရနေရာက ယခု မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ကို ပိတ်ပင်မှုတွေ လုပ်နေပြန်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်နဲ့ ရဲထောက်လှမ်းရေးများက မော်တော်ဆိုင်ကယ် တ၀ီးဝီးနဲ့ အတိုက်အခံပါတီဝင်တွေနောက်၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ လူငယ်တွေ၊ မိသားစုတွေနောက်က လိုက်လံနှောက်ယှက်နေတာတွေ၊ သူတို့တွေ အုပ်စုဖွဲ့သွာလာနေတာတွေကြောင့် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာမျိုး အခုတလောမှာ လျော့ကျသွားတယ်လို့ မျက်မြင်တချို့က ပြောလာပါတယ်။ ဒီအမိန့်ကို စစ်အုပ်စု ထိပ်သီးတွေထဲက တဦးက ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်၊ ရဲဖက်ထောက်လှမ်းရေးတွေအတွင်းမှာသာမက အခြားဝန်ထမ်းဌာနတွင်းမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။
“ဥပမာဗျာ … အင်န်အယ်ဒီပါတီခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်နောက်ကို သူတို့က ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ နောက်ယောင်ခံကော၊ ဗြောင်ကော လိုက်ကြတယ်။ ဆရာက တခါတလေ လမ်း ၃၊ ၄ ဘလောက်ကို ခြေလျင် လျှောက်ချင် လျှောက်သွားတာ။ အဖော် ပါပါ မပါပါ။ အဲသည်လိုဆိုရင် အဲဒီဆိုင်ကယ်ကောင်တွေ ဒုက္ခရောက်တော့တာပဲ။ နောက်ကနေ ဆိုက်ကယ်ကြီးကို တောက်လျောက် တွန်းပြီး လိုက်နေရတာကိုး” ဟု ၎င်းက ပြောပြသွားသည်။
၃ ဦးမြောက် ၀က်တုပ်ကွေး လူနာ တွေ့ရှိ၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ၀င်လာခြင်းဖြစ်
ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၀၉
A(H1N1 ) တုပ်ကွေးရောဂါပိုးရှိသူ နောက်တဦးကို ရန်ကုန်တွင် တွေ့ရသဖြင့် အင်္ဂါနေ့က ဝေဘာဂီ ကူးစက် ရောဂါကု ဆေးရုံသို့ ပို့လိုက်ရကြောင်း ယနေ့ထုတ် မြန်မာသတင်းစာများတွင် ရေးထားသည်။
လူနာသည် အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ လေကြောင်းဖြင့် ရောက်လာပြီး ၂ ရက်အကြာတွင် ဆေးရုံသို့ ပို့လိုက်ရကြောင်း သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ “လူနာနှင့်အတူ စီးနင်း လိုက်ပါလာသော လေယာဉ်စီး ခရီးသည် နိုင်ငံသား ၈၄ဦး၊ နိုင်ငံခြားသား ၁၃၆ ဦး စုစုပေါင်း ၂၂ဝ ဦး တို့အားလည်း တုပ်ကွေးရောဂါ လက္ခဏာများ ရှိ/မရှိ လိုက်လံ ရှာဖွေ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်” ဟု သတင်းစာများတွင် ရေးထားသည်။
မြန်မာပြည်နှင့် ကပ်လျက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မူ ရောဂါပိုးရှိသူ ၄၀၀၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါကြောင့် ၂၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ရရှိသည့် သတင်းများအရ သိရသည်။ ယမန်နေ့က တရက်တည်းတွင်ပင် ရောဂါပိုးတွေ့သူ ၁၄၇ ဦး ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက A(H1N1 ) ရောဂါပိုးရှိသူ အရေအတွက်၊ သေဆုံးသူ အရေအတွက်များ နေ့စဉ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နေ့စဉ်ထုတ် အရေအတွက် ဂဏန်းများကြောင့် အများပြည်သူကြားတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် တပတ်တကြိမ်သာ ထုတ်ပြန်တော့မည်ဟု ဆိုသည်။
Kaowao ဇူလိုင် ၁၆၊၂၀၀၉။
စံခလပူရီ(ဇူလိုင်-၁၆)။ ။ KNU တပ်မဟာ ၆ ကိုထိုးစစ်ဆင်ရန် ဘုရားသုံးဆူမြို့အနီး ရောက်ရှိနေသော နအဖစစ်ကြောင်း စကခ ၁၂၊ နည်းဗျူဟာ ၁ လက်အောက်ခံတပ်ရင်း ၂ ရင်းမှာ အနန်းကွင်းဖက်သို့ တိတ်တဆိတ်ဆုတ်ခွာသွားပြီး တပ်မ ၂၂ လက်အောက်ခံတပ်များ ဝင်ရောက်လာမည်ဟု KNU အရာရှိ
“တပ်ရင်းအမှတ်တွေ အတိအကျမသိရသေးဘူး၊ ဘယ်နှစ်ရင်းပါမလဲဆိုတာလည်း သေသေချာချာ အတည်
ပြုလို့မရသေးဘူး၊ ကြးဖြတ်စက်မှာ ဘုရားသုံးဆူနဲ့ အနန်းကွင်းကြား၊ တောင်စွန်း၊ မယ်ဇလီတို့ကို အရောက် ပြထားတယ်၊ လမ်းကြောင်းမှာ မဲမဲစိမ်းစိမ်းတွေကိုလည်း မမြင်ရသေးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ တက်လာနိုင်တဲ့ လမ်းပေါက်တွေမှန်သမျှကို ကျနော်တို့ဖြတ်ပိတ်ထားတယ်” အဆိုပါအရာရှိက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း မွန်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်ဒေသများတွင် မိုးများအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေသည်။ ချောင်းရေများ အဆမတန်မြင်းမားနေပြီး ကုန်းလမ်းရောရေလမ်းတွေပါ သွားလာမှုခက်ခဲ နေဆဲဖြစ်သည်။
ဘုရားသုံးဆူသို့ ပြည်တွင်းမှ လာရောက်နိုင်သော အဓိကလမ်းကြောင်းများဖြစ်သည့် ဘုရားသုံးဆူ -အနန်းကွင်း-သံဖြူဇရပ်နှင့် ဘုရားသုံးဆူ-ရေးမြို့ မော်တော်ကားလမ်းများမှာ မိုးရာသီရောက်သည်နှင့် ပျက်စီးသွားပြီး မြစ်ချောင်းများဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိရာ ယခုအခါ သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲနေသည်။
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့-ဘုရားသုံးဆူ ဇမိမြစ်ကြောင်းရေလမ်းမှာ ရေများအဆမတန် မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းများတွင် KNU ဂိတ်စခန်း အများအပြား နေရာအနှံ့တွင် ဖြန့်ချထားရှိသည်။ KNU
တပ်မဟာ ၆ ဌာနချုပ်၊ တပ်ရင်း ၁၆ တို့သည်လည်း ခံတပ်စခန်းသေများ မရှိပါ။ KNU ကိုထိုးစစ်ဆင်ရန် အဓိကပစ်မှတ်ကို လက်တွေ့တွင် ရှာဖွေရန် မလွယ်ကူကြောင်း စစ်ရေးအကဲခတ်သူများ သုံးသပ်ကြသည်။
စစ်အစိုးရက စေခိုင်းလာသည့်အတိုင်း KNU တပ်ဖွဲ့များကို စစ်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်နောက်ဖက်မှနေပြီး ဒီကေဘီကေကရင်တပ်ဖွဲ့များကို ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် စစ်တိုက်ခိုင်း
ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့်လ KNU တပ်မဟာ ၇ ထိုးစစ်တွင် ဒီကေဘီကေကရင်တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ရာမက ကျဆုံးခဲ့ရပြီး ဒဏ်ရာရသူများနှင့် ဒုက္ခိတအများအပြား အမွေဆက်ခံလိုက်ရသည်ကို သတင်းများတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ကြသည်။
တပ်မဟာ ၆ ကိုထိုးစစ်ကို ထိုဒီကေဘီကေကရင်တပ်ဖွဲ့များ လာရောက်တိုက်ခိုက်မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း စတင်လှုပ်ရှားလာသည့် အရပ်အယောင်များ မတွေ့ရှိရသေးပေ။
ထိုသို့ စစ်ဆင်ရေးစတင်ရန် ပြင်ဆင်လာသည်နှင့်တပြိုင်တည်းမှာ KNLA တပ်မဟာ ၆ ကလက်ဦးမှုရယူ
လိုက်ရာမှာ DKBA, KPF တပ်ဖွဲ့ဝင် ၇၀ ခန့် KNU နှင့်ပြန်လည်ပူးပေါင်း လာခဲ့သည်။
KPF အမှတ် ၃ တပ်ရင်းမှူး မန်းလေးဝါးဆိုသူမှာ KNU ထံ ၅ ရက်ခန့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဘုရားသုံးဆူ
Kaowao ဇူလိုင် ၁၅၊၂၀၀၉။
စံခလပူရီ(ဇူလိုင်-၁၅)။ ။ ယခုတလော မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့အစည်း သတင်းဖေါ်ပြချက်များတွင် အချို့ အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်များ၌ မသိမသာလွဲချော်မှုများတွေ့ရှိနေရကြောင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် နိုင်ရွှေသိန်းက Online မှတဆင့် Kaowao Newsgroup ကို ယနေ့ပြောကြားလာသည်။
“သူတို့က သက်ဆိုင်သူကိုလည်း မမေးမမြန်းပဲရေးနေတော့ အဲဒီလိုပဲလွဲမှားရတာတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်”ဟု ကောက်ချက်ချ ပြောဆိုခဲ့သည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီဝင်ဟောင်း နိုင်ဗညားက “အချို့က မှားမှန်းသိသိကြီးနဲ့ သူတို့ရေးနေတာက အမှန်လိုထင်
သွားရအောင် တမင်လုပ်နေတာပဲလို့ကျနော်ယူဆပါတယ်၊ အခုလောလောလတ်လတ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဆို
တော့ ဟိုလူလည်းမှတ်မိ၊ ဒီလူလဲသိနေကြတော့ ပြဿနာမရှိသေးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေကြာလာယင် အငြင်းပွားစရာတွေဖြစ်လာကြပါမယ်၊ အချက်အလက်တွေ ဗိုင်းရပ်အတိုက်ခံရသလို ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သွားပြီး နောက်ဆုံး ပုဂံရာဇဝင်တွေကိုပြောဆိုကြရသလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဓါးထမ်းပြီးပြောလာကြရတဲ့အထိ အငြင်းပွားစရာတွေဖြစ်သွားနိုင်မယ်၊ မွန်သမိုင်းတွေကိုလည်း သက္ကရာဇ် လွဲမှားအောင်၊ ဟိုယောင်ဒီယောင်ဖြစ်သွားအောင် အဖြစ်မှန်ကိုအမှန်ရေးပြကြပေမဲ့ သက္ကရာဇ်နေ့ရက် အမှတ်အသားတွေကို မသိမသာလွဲမှားမေ့ကျန်ခဲ့ဟန်သယောင်ယောင် လုပ်ပေးထားခဲ့ယင်လည်း နောင်လာ နောက်သားတွေ ဒီသက္ကရာဇ်တွေကို ငြင်းခုံနေကြတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားရတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ကျနော်တို့ သတိပြုကြပါ” ဟု သူ၏အမြင်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အရာရှိချုပ်ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်နှင့်တကြိမ် မော်လမြိုင်မြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို နယ်ခြားစောင့်
တပ်ပုံစံ (သို့မဟုတ်) ပြည်သူ့စစ် ပုံစံဖြင့်ဖွဲ့စည်းရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်” ဟု အင်တာနက်ဝက်ဆိုက် သတင်း တစ်ရပ်တွင် ယမန်နေ့ကဖေါ်ပြထားလျှက်ရှိသည်။
ဤကိစ္စနှင်ပတ်သက်၍ မော်လမြိုင်ဆက်ဆံရေးရုံးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက “ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ဟာ မွန်ပြည်သစ်နဲ့ နဝတအပစ်အခတ်ရပ်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်အထိမ်းအမှတ်အဖြင့် နိုင်ရွှေကျင်စာကြည့်တိုက်မှာ ဆွမ်းကျွေးတဲ့နေ့ပါ၊ ကျနော်တို့လူကြီးတွေ ဗဟိုမှာအစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်၊ ဘယ်ကဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့် လာမလဲ” ဟု ယနေ့တွင်ဖုန်း
ဖြင့် ထပ်မံအတည်ပြုချက်တောင်းရာ၌ ယင်းကဲ့သို့ပြောဆိုပြန်ပါသည်။
မွန်ပြည်သစ်သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရေးသားတင်ပြနေမှုများအပေါ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှလည်း မွန်သတင်းဌာန တာဝန်ခံများနှင့် မကြာမီရက်ပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံကြမည်ဟု သိရသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှအောက်ခြေခရိုင်၊ တပ်ဖွဲ့များအသီးသီးသို့ သဘောထား
စံခလပူရီ(ဇူလိုင်-၁၆)။ ။ ယခုရက်ပိုင်းများတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ပေါလစ်ဗျူရိုများ အောက်ခြေရှိ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်၊ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသို့ သွားရောက်ကာ လက်ရှိပကတိဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး နယ်ခြားတပ်ဖွဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်အစိုးရ၏ ကမ်းလှမ်းချက်များအပေါ် မည်ကဲ့သို့တုန့်ပြန်သင့်သည်ကို အောက်ခြေအဆင့် ပါတီဝင်ရဲဘော်များ၏ အမြင်များကိုရယူနေကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင် တစ်ဦးကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဒုဥက္ကဌနိုင်ရဿသည် မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီဝင် ပြည်ပရုံးများ
တာဝန်ခံ နိုင်အောင်မင်းသည် ဗဟိုဒေသအနီးဝန်ကျင်တစ်ဝိုက်နှင့် ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသ၊ ဗဟိုအထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံ နိုင်ထာဝရသည် ထားဝယ်ခရိုင်၊ ပြည်တွင်းရုံးများတာဝန်ခံ နိုင်တလညီသည် သထုံခရိုင်အသီးသီတို့ သွားရောက်နေပြီဟု သိရသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီလက်အောက်ခံ မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MNLA တွင် အမှတ် ၁ တပ်ရင်း (မော်လမြိုင်ခရိုင်)၊ အမှတ် ၂ တပ်ရင်း(ထားဝယ်ခရိုင်)၊ အမှတ် ၄ တပ်ရင်း(သထုံခရိုင်)၊ အမှတ် ၅ အမြဲတမ်း တပ်ရင်း၊ အမှတ် ၇ အမြဲတမ်းတပ်ရင်း၊ ဗဟိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့၊ ကွန်မင်ဒိုတပ်ခွဲတို့ ရှိသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးဒေသများအဖြစ် မော်လမြိုင်ခရိုင်တွင် မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ သထုံခရိုင်တွင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ဂျိုင်းမြစ်ဒေသ၊ ပေါင်မြို့နယ်ဒေသ၊ ထားဝယ်ခရိုင်တွင် ရေးမြို့နယ်တောင်/မြောက်၊ ရေဖြူမြို့နယ်၊ ပြည်တွင်းစည်းရုံးရေးဒေသတွင် မော်လမြိုင်ဒေသ၊ ဘီလူးကျွန်း ဒေသများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ဗဟိုဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်နှင့် ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်ဒေသတို့တွင်လည်း အခြေပြုလှုပ်ရှုားလျက်ရှိသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ပါတီအောက်ခြေရဲဘော်ပါတီဝင်အဆင့်ဆင့်၊ ခရိုင်ကော်မတီဝင်၊ မြို့နယ်ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောထားအမြင်များကို မကြာမီကျင်းပမည့် အရေးပေါ်ဗဟိုကော်မတီ၌ အသေအချာပြန်လည် သုံးသပ်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာသည်လည်း အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဂျပန်စသည့်နိုင်ငံများရှိ အဝေးရောက်မွန်များနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး အကြံဥာဏ်များရယူခဲ့ရာ ဇူလိုင်လ ၉ နေ့တွင် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသည်။ သူ၏ခရီးစဉ်မှာ ၂ လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့သူဟု သိရသည်။
လေ့လာသုံးသပ်သပ်သူများအဆိုအရ မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် ယခုလာမည့်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင်
လည်း စစ်အစိုးရအပေါ် တစုံတရာပြောင်းလဲပေးမည့် အရိပ်အယောင်များမတွေ့ရှိရကြောင်း ဗဟိုကော်မတီဝင် များတွင် အမြင်သဘောထားရှိနေကြ၏၊
မွန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ၊ မွန်မျိုးချစ်များ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ မွန်လူငယ်များ၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်များ၊ အဝေးရောက်မွန်များသည်လည်း အဆိုပါနယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ရေးအဆိုကို ထောက်ခံနေသူများပြားကြောင်း လေ့လာဆန်းစစ်မှုများအရ သိရသည်။
နှစ်လုံးသုံးလုံး လောင်းကစားနှင့် ဆင်းရဲသားများ၏ ချွှေးနဲစာ
ကြာသပတေးနေ့၊ 16 ဇူလိုင်လ 2009 စိုင်းအောင် . “နှစ်လုံး သုံးလုံး ” ဆိုသည်မှာသာမန် သချာင်္ဂဏန်း အရည်အတွက်ကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်။ ဂဏန်း နှစ်လုံး သုံးလုံး တိုက်ကို အလျော်အစားပြုသည့် လောင်းကစားများကို လျှို့ဝှက် ကုဒ်အဖြစ် ခေါ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
သာမန်ပြည်သူများထံမှ အဆိုပါ ဝေါဟာရ ဆင်းသက်ခဲ့ကြသည်ဟုတော့ မထင်မိပါ။ စကားလုံးများ သည် တစ်စုံတစ်ခု ထူးခြားမှုကို ပြနေသလိုပင်။
ဗမာပြည်တွင် လောင်းကစားလောကတွင်း မည်သူများ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် ဆိုသည်ကို အဆိုပါစကားလုံးများက ရည်ညွန်းနေပုံရသည်။
နှစ်လုံးဆိုသည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ စတော့ ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင် တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်ထွက်သည့် ကိန်းဂဏန်းများအနက် နောက်ဆုံး နှစ်လုံးကို ယူ၍ ကိုရွှေဗမာများ အလောင်းအစားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဂဏန်းနှစ်လုံးစလုံးတူညီပါက ထိုးသည့် ငွေပမာဏ၏ အဆ (၈ဝ) ခန့်ကို ထိုးသားက ရရှိပါသည်။
သုံးလုံးဆိုသည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ထီပေါက်စဉ်၏ နောက်ဆုံး (၃)လုံးကို ယူ၍ အလောင်းအစားပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကာ သုံးလုံးစလုံးတူညီပါက ထိုးသည့်ငွေ၏ အဆ (၅၅ဝ) မှ (၆ဝဝ) အထိကို ဒိုင်လုပ်သူက အလျှော်ပေး ရလေသည်၊ အဆိုပါထီက တစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ်ထွက်သည်။
စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျနေကာ ကုန်းကောက်စရာမရှိဖြစ်နေသည့် ဗမာပြည်သူများက နှစ်လုံးနှင့် သုံးလုံးလောင်း ကစားကို ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်လမ်းအဖြစ် ယုံကြည်ကြ၍ ထိုးသူများရှိသလို တချို့ကတော့ စားဝတ်နေရေး ပြေလည် စေရန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကဲ့သို့ နေ့စဉ်ထိုးနေသူများလည်း ရှိသည်။
ထိုသို့ ထိုးကြသည့် အထဲတွင် သာမန်ပြည်သူများသာမက စစ်တပ်၊ ရဲ ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းပေါင်းစုံမှ ၀ါသနာရှင်များ ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်တိုင်က ထိုးကြသလို ပေါက်ဂဏန်းထိအောင် တွက်နည်းပေါင်းစုံဖြင့် တွက်ချက်တတ်ကြပြန်သည်။
အလောင်းအစားမှန်လျှင် ဒိုင်ကတော့ အသာစီးကနေသည်၊ နှစ်လုံးတွင် ထိုးသား အဆ (၁ဝဝ) လျှင် ဖြစ်နိုင်ချေ (၁ဝ)ရာခိုင်နှုန်းမျှသာရှိသည်။ သုံးလုံးဆိုလျှင်တော့ အဆ (၁ဝဝဝ) လျှင် ဖြစ်နိုင်ချေ အနည်းငယ်သာရှိသည်။
အလောင်းအစားလုပ်သူများသည် တစ်ရက်ပေါက်နိုးပေါက်နိုးဖြင့် ရှုံးမဲမဲကာ နောက်ဆုံးတော့ စီးပွားပျက်သွား သူများ မြောက်မြားစွာကို ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ဘူးသည်။
လွန်ခဲ့သည့် (၃) ရက်ခန့်က အရောင်းအဝယ်လုပ်နေသည့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နှင့် တွေ့ဖြစ်သည်။ သူတို့အရပ် ဒေသ က ဒေသခံများ နှစ်လုံး သုံးလုံး လောင်းကစားကြောင့် ဒုက္ခရောက်ကြရပုံ အာဏာပိုင်များက လောင်းကစား ဒိုင်ထံမှ လာဘ်ငွေယူ၍ ခွင့်ပြုထားပုံများကို စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ဆောင်းပါးရှင်အား ပြောပြသွားသည်။
လောင်းကစားကြောင့် ရပ်ကွက်သူ/သားများ ဒုက္ခရောက်နေပုံကို ၎င်း၏ အစပိုင်းရင်ဖွင့်သံက ဒီလိုပါ။
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့မှာ ပေါက်ကုန်းအုပ်စု ကုက္ကိုလ်တောရပ်ကွက်မှာ နှစ်လုံးနှင့် သုံးလုံး လက်ကြီးလောင်း ကစားဒိုင်ကြောင့် ဒေသခံ တို့ ဒုက္ခများနေကြတယ်စသဖြင့်ဖြစ်သည်။
သူတို့ လောင်းကစားကြောင့် လူမှုရေးဒုက္ခများ ခံစားနေရပုံကိုတော့ အခုလို အသေးစိတ် ဆက်ပြောသည်။
“ရပ်ကွက်ထဲမှာ မိသားစုတွေ ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ ကလေးတွေကိုယ်တိုင် နှစ်လုံး သုံးလုံး ရွေးနေကြတယ်၊ လူတွေက အဆင်မပြေကြတာလေ၊ မိသားစုတွေရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုလဲ နှစ်လုံးထိုးလို့၊ ဆိုင်ပြုတ်သွား တယ်ဆိုလည်း နှစ်လုံးထိုးလို့၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာ၊ ဒီနှစ်လုံး သုံးလုံးက ဒုက္ခပေးနေတာ ”
စီးပွားရေးအဆင်မပြေရာမှ ထွက်ပေါက်အဖြစ် လောင်းကစားလုပ်မိသဖြင့် အကြွေးသံသရာမှ ရုန်းမထွက်နိုင်ပုံ၊အရောင်း သမားနှင့်ထိုးသား ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စကြောင့် တုတ်တပျက် ဓါးတပျက် ရိုက်ပုတ် ဖြေရှင်းရပုံများကိုလည်း သူကြုံ တွေ့ရသမျှကို ထပ်ပြောသည် ၊၊
“ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ လောင်းကစားကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့လက ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သေးတယ်။ ဒိုင်က တစ်လ (၃) သောင်း နဲ့ ကုက္ကိုလ်တောရပ်ကွက်ထဲက အောင်မင်း ဆိုတဲ့စာရေးတစ်ယောက်ငှားထားတယ်၊ သူ့ညီမကလဲ နှစ်လုံး သုံးလုံးပဲ ရောင်းတယ်၊ သူ့တို့ အဖေက ဦးမောင်မောင်တဲ့ ”
“သူ့ညီမကရောင်းတာ၊ ရောင်းပေးတဲ့မိန်းမက ပိုက်ဆံမပေးနိုင်လို့၊ နေ့စဉ် နေ့စဉ်ဆိုတော့ အကြွေးကထပ်ထပ်တက် သွားတာ အကြွေးရစရာ (၈) သောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ အတိုးနဲ့ဆို (၉) သောင်းလောက် တက် သွားတာပေါ့။ ဟိုကလည်း မပေးတဲ့ အခါကျတော့ သူ့အဖေဦးမောင်မောင် ကိုယ်တိုင် ပိုက်ဆံမပေးရကောင်း လားဆိုပြီး ဂေါ်ပြားကြီးကိုင်ပြီး လိုက်တောင်းတာ ရန်ဖြစ်ပြီးရိုက်ကြသေးတယ်လေ ” ဟု သူက ပြောသည်။
ဒီကိစ္စများကို ရယက (ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့) ကိုပဲတိုင်တိုင် (ရဲ) စခန်းမှူးကိုပဲတိုင်တိုင် ဒိုင်များက ငွေပေး၍ နှုတ်ပိတ်ထားသဖြင့် အကျိုးမရှိဖြစ်ရသည့် သူ့အတွေ့အကြုံကို လည်းရှင်းပြသည်။
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့် ထိုးသားတို့ အကြွေးမပေးသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ထွေးလုံးရိုက်နှက်ကြသည့် အမှု အခင်းကိစ္စ ရပ်ကွက်အဏာပိုင်များထံ ရောက်ရှိသွားသော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူမှုမရှိခဲ့ဟုဆိုသည်။
ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ရောင်းချနေသည့် နှစ်လုံးနှင့် သုံးလုံးဒိုင်ကို ရဲများက ခြေရာခံမဖမ်းဆီးနိုင် - သည့်အချက် ဆိုအပေါ် သူ့အနေဖြင့် အံ့သြပုံမပေါ်ပါ။
“ဗန်းမော်မှာ နှစ်လုံး သုံးလုံးမှာ ဘုန်းကြီးဒိုင်ဆိုတာ နံမယ်ကြီးတယ်၊ ဘုန်းကြီးလူထွက်က ဖွင့်ထားလို့ဘုန်းကြီး ဒိုင်လို့ ခေါ်တာ။ သူ့မိန်းမနံမယ်က မစံပယ်တဲ့၊ ဥက္ကဌနံမယ်က သက်ဝင်းတဲ့၊ ပေါက်ကုန်းရပ်ကွက်ထဲမှာလဲ ရဲ စခန်းရှိတယ် နှစ်လုံးသုံးလုံးအမှု နဲ့သူ့တို့ဆီရောက်လဲ ဒီအတိုင်းပြီးသွားတယ်။ လောင်းကစားမှု ထိထိရောက် ရောက်အရေးယူရ မယ်လေ ”
“သူတို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေးတဲ့ကိစ္စ၊ ကိုယ့်ကိုတော့ ဘယ်လောက်ပေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်ပြောမလဲ၊ ရဲတွေကို မပေးလို့ ရှိရင် ဒီလောက်ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ရောင်းနေတာ ရမလား၊ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ရဲတွေ ဒီလောက်အများကြီး ရှိတာ နှစ်လုံး ဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှရောင်းနေတာ သူတို့ဘာလို့မဖမ်းနိုင်ရမှာလဲ့ လစဉ်ကြေးပေးနေတယ်ဆိုတာ လည်းကြားနေ ရတယ် လေ ” လို့ သူက ဆိုသည်။
ထိုးသားဗိုက်မှောက် ဒိုင်တိုက်ဆောက် ဆိုသည့်စကားအတိုင်း လောင်းကစားဒိုင်များကြီးပွားနေကြကြောင်း သိရသည်။
လောင်းကစားလုပ်သည့် ရပ်ကွက်သူ/သားများအကြား မကြာခဏရိုက်ကြပုတ်ကြ စကားများကြပါက - ဒီနှစ်လုံးထိုးလို့၊ စားစရာမရှိရင် နှစ်လုံးထိုးလို့ ဆိုသည့် အသံကိုသာကြားနေရသည်။
ယခုအချိန် ဒေသခံများက လူမှု့ရေး စီးပွားရေး အထွေထွေဒုက္ခများရင်ဆိုင်တွေ့နေချိန်တွင် ဒိုင်ချုပ်ကြီးကတော့ တစ်ရက် ရောင်းကြေး သိန်း (၂ဝ) (၃ဝ)လောက် ရရှိနေသည်။ ဟိန်းနေသည့် တိုက်အိမ်ကြီးနှင့် ကားကို တစ်စီးမှ နှစ်စီးဝယ်ယူ နိုင်သည်အထိ ချမ်းသာသွားသည်။
ဒါ့ကြောင့်ဟုထင်သည် ဒီလောင်းကစားဒိုင်က တစ်မြို့လုံးကို အုပ်ချုပ်ထားသည်ဟု ခုလို ဆိုပြန်သည်။
“တစ်မြို့လုံးကြီးကို သူတို့ အုပ်ချုပ်ထားတာ (အဆိုပါ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း) ဇေယျသုခ ကိုယ်တော်တွေ ကအစ ၂ လုံးထိုးကြတာ၊ ၃ လုံးထိုးကြတာ၊ မံစီ မိုးမောက် တစ်နယ်လုံးပဲ၊ ချောင်းထဲဘက်ကနေဆို မန်သာရွာ အဲဒီအထိ နယ်ချဲ့ထားတယ်၊ ကားဆိုလည်း ပထမ ဂျစ်ကားအမိုးဖွင့်လေး၊ အခုဗင်ဖင်ကောက် တစ်စီးထပ်ဝယ်ထားပြန်ပြီ၊ဆိုင်ကယ် ဆိုတာတော့ မပြောနဲ့တော့၊ အစီးပေါင်းမြောက်များစွာပိုင်တယ်။ ” ဟု ပြောသည်။
လောင်းကစားဒိုင်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ဆင်းရဲသားချွေးနဲစာများဖြင့် ၀ယ်ယူထားသည်ဟု သူအပါအ၀င် ဒေသခံများ တထစ်ချ ယုံကြည်နေကြသည်။
ဗမာစစ်အုပ်စုကြီးစိုးသည့် ယနေ့ကာလတွင် လောင်းကစားအမှုဖြင့် အကွက်ဆင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ ထောင်နန်းစံနေရ သည့် နိုင်ငံရေးသမားများရှိနေသည်ကိုတော့ ပြောမယုံကြုံဖူးမှ သိကြသည်။
သို့သော် လက်ကြီးလောင်းကစားဒိုင်များမှ ရဲများ ဒေသအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများကို လာဘ်ငွေပေးထားသဖြင့် အဖမ်းဆီးမခံရပဲ လွတ်မြောက်နေခြင်းကိုမူ အံ့သြသူမရှိကြချေ။
ယာယီတပ်ရုပ်ထားသည့် စခန်းဟောင်း နအဖ စစ်တပ် နေရာပြန်ယူ
ကြာသပတေးနေ့၊ 16 ဇူလိုင်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့် .မိုင်းဆတ်မြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် လွယ်ဆမ်ဆုမ်တောင်ကြောရှိ အဓိက ၀ တပ်စခန်းတခု နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တပ်ရုပ် ထား သော နအဖ ချက်ပွိုင့် တပ်စခန်း၌ ယခုလဆန်းပိုင်းက ပြန်လည်နေရာယူ အင်အားဖြည့်တင်းလာကြောင်း ဒေသခံ များ ကပြောပါသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 15 ဇူလိုင်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့် .
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ဒေသခံများ အခက်အခဲဖြစ်
Thu 16 Jul 2009, IMNA
ယခုလအတွင်း မွန်ပြည်နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် တချို့ဒေ သတွင်က ရေမြုပ်ပြီး၊ ကျောင်းသားများလည်း ကျောင်းမတက်နိုင်သည့် အ ခြေနေပင်ဖြစ်နေသည်ဟု သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်ရှိ ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ကလော့ သော့၊ တောင်ပ၊ ထုံမံ နှင့် ကွမ်ခပူ ကျေးရွာများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာ သွန်းမှုနှင့် ဆည်မြောင်ရေ စီးဆင်းမှုကြောင့် ရေများပြည်လျှံလျက်ရှိသည်။
“မိုးကြီးနေတာ ၅ ရက်လောက်ရှိပြီး၊ ကျွန်တော့် ခလေးတွေလည်း ကျောင်းမ သွားနိုင်ဘူး။ သူတို့က ကလော့သော့ရွာမှာ ကျောင်းသွားတက်နေကြတယ်။ ရေက ခါးလောက်ရှိတော့ သူတို့က ဖြတ်လိုမရဘူး” ဟု ထုံမံကျေးရွာမှ ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထုံမံကျေးရွာနှင့် ကွမ်ခပူကျောင်းရွာတွင် မူလတန်ကျောင်းသာရှိပြီး အလယ် တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းတက်ရသည့် ကျောင်းသားအားလုံး ကလော့ သော့ရွာရှိ အထက်တန်ကျောင်းတွင် သွားတက်ရပါသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ် မြန်မာအစိုးရ အာဏာပိုင်တို့က ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံကို တည်ဆောက်ထားပြီးနောက် ၄င်းဆည်တဝိုက်တွင် စီးဆင်းနေသည့် အဓိ ကချောင်းများကို ပိတ်လိုက်သည်။ ချောင်း၏ ဘေးတဘက်တစ်ချက်တွင် လည်း လယ်ယာမြေများရှိပြီး၊ မိုးရာသီ ရောက်သည့်အချိန်တွင် ရေ လှောင်တမံမှ ရေများ လျှံကြလာပြီး၊ ချောင်းထဲသို့ ဆီးဝင်သွားကာ ၄င်းမှ တဆင့် လယ်ကွက်ထဲကို လျှံကြကုန်သည်။
ရေလှောင်တမံအနီးနားတဝိုက်ရှိ ကျေးရွာများလည်း မိုးရာသီအချိန်တွင် ရေ ကြီးပြီး သွားလာရန်အတွက် အခက်ခဲရှိသည်ဟု ကွမ်ခပူရွာသားတစ်ဦး၏ ပြောပြာချက်အရ သိရသည်။
“ကျောင်းသား အယောက် (၁၀၀) ကျော်လောက် ကျောင်းမတက်နိုင်ဘူး၊ အများအားဖြင့် အလယ်တန်း ကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြတယ်” ဟု ကလော့ သော့ကျေးရွားမှ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပိတ်ဆို့နေသောရေများ စီးဆင်းနိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာလူကြီးများက မုဒုံမြို့ မယကဥက္ကဌထံ ရေမြောင်းပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသော်လည်း၊ ယ ခုချိန်ထိ အကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ။
“ကျွန်တော်တို့က မယက ဥက္ကဌထံမှာ ရေမြောင်းလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆို ထားတာ (၁၀) ရက်လောက်ရှိပြီး၊ မိုးမကြီးခင်ကတည်းက စာနဲ့ရေးပြီး တောင်းဆိုထားတာ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အခုချိန်ထိ ဘာမှအကြောင်း မပြန်သေးဘူး” ဟု ထုံမင်ရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်အတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် လူနေ ရပ်ကွက်များအတွင်း ရေဝင်ရောက်မှုကြောင့် ရေးမြို့၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ် ကွက်၊ ဓနိတောကွက်သစ်နှင့် ချောင်းတောင်ရပ်ကွက်တို့မှ အိမ်ထောင်စု ၆၉ စု၊ လူဦးရေ ၃၂၅ ဦးတို့အား ယာယီကယ် ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ရွှေ့ ပြောင်းနေရာချထားပေးခဲ့ကြောင်းယ မန်နေ့ထုတ်မြန်မာ့အလင်းသတင်း စာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးနေခြင်းကြောင့် ရွာသားများ ပြောင်းရွှေးနေရ
Wed 15 Jul 2009, မိကျလွန်းထော
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေခြင်ကြောင့် ဇမိမြစ်အနီးရှိ ချောင်းဆုံးရွာ ဘုရားသုံးဆူဒေသတွင် မြစ်ရေကြီးပြီး မြစ်အနီးအနားတွင် နေထိုင်နေသူများ အနီးအနားရှိရွာများသို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်နေကြသည်။
မြစ်ရေမကြီးခင် ၂/၃ ရက်အလိုတွင် ရွာသားများက ရွာရှိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ အချို့သောသူများမှာ ဘုရားသုံးဆူမြို့ရှိ ကြိုးခပလုရွာနှင့် ဘုရားသုံးဆူမြို့ပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။
“ရေတက်လာတာ ပုံမှန်ထက် ပေ ၃၀ မြင့်တက်လာတယ်၊ အဲဒီမြစ်အနားမှာရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင် မြုပ်ကုန်တယ်၊ ဒါက နှစ်တိုင်ဖြစ်နေတာ၊ ဒီနှစ်ကျတော့ ရေမကြီးခင် ကြိုတင်ပြောင်းထားတာ” ဟု ကြိုးခပြုရွာသားတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
၄င်းသို့ ရေးကြီးနေချိန်တွင် အိမ်ခြေ ၄၀ ကျော် ၅၀ နီးပါးတို့ မြုပ် သွားခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် မိုးရပ်သွားသည့်အတွက် မြစ်ရေများ ကျ ဆင်းသွားကြောင်းကိုလည်း ဘုရာသုံးဆူမြို့မှ ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရ သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
မြုပ်သွားသည့် နေရာများမှာ ချောင်းဆုံရွာအနိမ့်ပိုင်း လှေဆိပ်နှင့် အနီးတဝိုက်ရှိ လူနေအိမ်များနှင့် ၄င်းအနီးရှိ ဈေးဆိုင်တန်းများ၊ အိမ်ဆိုင်ကြီးများတို့ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
၄င်းချောင်းဆုံရွာသည် ဘုရားသုံးဆူမြို့နှင့် ၉ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး လူနေအိမ်ခြေ (၂၀၀) ခန့်ရှိပြီး ဇမိမြစ်ကမ်းစပ်တွင် တည်ရှိနေ သော ရွာဖြစ်သည်။ ၄င်းအပြင် မိုးရာသီကာလများတွင် ပြည်တွင်း နှင့် နယ်စပ်ဒေသသို့ ကုန်စည်ကူးသန်းသွားလာရာတွင် အဓိက ကျသော လှေဆိပ်ရွာလည်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သာမက ဘီလူးကျွန်းရှိ ရွာများတွင်လည်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်းကြောင့် ကောက်စိုက်သမများ ကောက်စိုက်မသွားရဘဲ ရပ်နားနေရသည်ဟု ဘီလူးကျွန်းရှိ ဒေါင်းဥရွာသားတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်အတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့မှု ကြောင့် လူနေရပ်ကွက်များအတွင်း ရေများဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ရေ ဝင်ရောက်မှုကြောင့် ရေးမြို့ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်၊ ဓနိတော ကွက်သစ်နှင့် ချောင်းတောင်ရပ်ကွက်တို့မှ အိမ်ထောင်စု ၆၉ စု၊ လူဦးရေ ၃၂၅ ဦးတို့အား ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ရွှေ့ပြောင်း နေရာချထားပေးခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့အလင်းသတင်း စာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရေဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွားသည့်ရပ်ကွက်များနှင့် အခြားအနိမ့်ပိုင်း ရပ်ကွက်များ၌ ရေကင်းများချထားပြီး ရပ်ကွက်အလိုက် ရွှေ့ပြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် နေရာချထားရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကာ မြို့နယ်တာ ဝန်ရှိသူများက လိုအပ်သည်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်းလည်း ၄င်းက ဆိုသည်။